Work Abroad Dubai 🥇 【Thola futhi Faka isicelo sezikhala zomsebenzi e-UAE】
Umsebenzi Abroad Dubai - Thola bese Ufaka isicelo sezikhala zomsebenzi e-UAE
I-Dubai ye-expatriates - Manje Siqasha e-UAE
Imisebenzi yokuthengisa e Dubai
Kushicilelwe ngu Dubai City Inkampani at January 20, 2018
Ukusebenza Ngaphandle Kwezwe Dubai
Ukuqaphelisisa Abafuna Imisebenzi Yomhlaba Wonke!
Sebenza Kwelinye Izwe Dubai nge Dubai City Inkampani. Ukunakekela abasha abafuna uJobe kusuka emhlabeni wonke. Sinika usizo ekufuneni izikhala zemisebenzi ku- UAE. Uma ufuna ukuqashwa eDubai. Silapha ukukusiza ekutholeni umsebenzi emsebenzini e-UAE. Singa ukusiza ukuthola umsebenzi eDubai. Konke okudingeka ukwenze kubheka izinsizakalo zethu ngezinsizakalo zokuqasha.
Ithimba lethu lokuqasha liqasha imisebenzi eminingana e-UAE. Sebenza ngaphandle kwe-Dubai, yilokho okufunwa yilowo nalowo futhi siyikho lapha ukukusiza uthole umsebenzi eDaily City. Wonke umzingeli wemisebenzi yamazwe omhlaba nakanjani unethuba lokusebenza eDubai. IDubai City Company esiza ukuthola imisebenzi emihle kakhulu eDubai nase-Abu Dhabi. Kepha ngaphambi kokuthi uze uye enhloko-dolobha yase-United Arab Emirates. Sicela uvakashele ukuqondisa abafuna umsebenzi. Kuzodingeka uthole ulwazi oluthile esandleni ukuze uthole umsebenzi e-Dubai.
Sibheka abantu abahlukile abangakwazi ukusebenza kithi. Sibheke njalo abantu abaqhakazile, abanekhono futhi abanomdlandla. Ungu ngifuna umsebenzi e-Dubai?. Sisebenzela izikhundla eziningana e-Dubai. Ngesikhathi esifanayo, Imisebenzi Yomsebenzi nemisebenzi e-Dubai City ivulekile kuwe. Ngalokhu engqondweni, siyi-Dubai City Company futhi njengomfanekiso. Singabantu inkampani ehamba phambili yokuqasha futhi isiza somsebenzi e-UAE. Sifuna abafuna umsebenzi. Ukusebenza phesheya ngaphandle kokuthola ulwazi. Lokho akuyona inkinga.
Layisha kabusha i-Resume emisebenzini yasemaphandleni e-UAE
Ngokuvamile, sithanda ukubeka imisebenzi emisha e-Dubai!
Dubai City Inkampani ihlinzeka iseluleko umsebenzi. Izinhlelo zethu zokufuna umsebenzi kanye izindlela zokuzithengisa wena e Dubai. Yiba yindlela entsha yabathuthukisi base-UAE. Uma uvela kwamanye amazwe futhi ulindele ukuthola umsebenzi. Inkampani yethu impela kuwe. Eqinisweni, izinkampani zase-Emirates ziqashe lonke elaseMpumalanga Ephakathi. Futhi singomunye wabahlinzeki bamathuba aphezulu kakhulu a umsebenzi e Dubai nase-Abu Dhabi.
Ukusebenza Ngaphandle Kwezwe Dubai kwama-Expats
Indawo enhle yokusebenza eMpumalanga Ephakathi eDubai. Empeleni, uma ungakwenzi howokuthola imisebenzi yomhlaba wonke ehhotela Ukuphathwa kwe-UAE. Inkampani yethu ingakusiza thola umsebenzi phakathi nezinsuku ze-60. Yize lokhu kungaba ukulayisha kabusha kweqiniso. Inkampani yethu njengelungu le-premium izokuthola ebhodini labaqashi be-Middle East.
Ukusebenza Ngaphandle Kwezwe Dubai - Siqasha eDaily City!
Thumela impendulo yeMisebenzi e-Dubai
Sicela wabelane nathi website yezemisebenzi ukusiza abanye!
Joyina nathi Thina Siqasha Dubai!
Silindele ukuqhubeka kwakho Ukusebenza Ngaphandle Kwezwe Dubai. Singathanda uthando ukukusiza ukuthola umsebenzi ku-UAE. Noma kunjalo, asikwazi ukuphoqa ezinye izinkampani ukuthi zikunikeze umsebenzi wamaphupho. Kepha uma singakusiza, nakanjani sizokwenzela wena. Inhloso yethu yibo abafuna imisebenzi yomhlaba thanda uDubai. Uchwepheshe wethu wokuqasha uzokwazi ukukusiza ngalokhu. Ikakhulu uma ungumhloli we-Indian career. Izinkampani zase Dubai zizokulangazelela ukukuqasha.
Ngenjongo yokukusiza. Uma singenalo ithuba lokwenza abaqashi baqashe. Ithimba lethu lokuqasha lingenza lokho ngokuqinisekile. I-Duba City City inkampani ikukusiza nje ukuba abantu baqashe. Inkampani yethu yokuqasha isiza abaningi abafuna umsebenzi ukuthola Ukusebenza Ngaphandle Kwezwe Dubai. Ikakhulukazi uma uvela eNingizimu Afrika. Ngisho Abafuna umsebenzi wase Pakistani bathola imisebenzi nathi.
Mayelana nezinsuku ze-60 Ukusebenza Ngaphandle Kwezwe Dubai - yisikhathi esiyidingayo ukukunikeza izithuba zomsebenzi e-Dubai. Ukubeka ngenye indlela, umsebenzi wokusesha umsebenzi kuyinkqubo ende - Yebo kuyiqiniso udinga ukugxila kakhulu ku-Linkedin nakwezinye izindawo zomsebenzi. Kubalulekile ukuqaphela ukuzama ukuxhuma nabaningi bama-HR nabaqashi. Yiya ku-LinkedIn bese uzama ukulayisha ifayela lokuxhumeka nokuphindaphindiwe. Kuze kube yilapho ufinyelela bonke abaqashile e Dubai. Lokhu indlela kuphela yokuthola umsebenzi wakho manje futhi singakusiza.
Sisebenzela abantu abahambela emazweni ase-Emirates Imisebenzi e-Dubai
Ufuna umsebenzi e-Dubai ?. Ngenkampani yethu, ungathola umsebenzi ngokushesha. Ithimba lethu lokuqasha lilapha ikusize uthole umsebenzi omangalisayo e-Abu Dhabi, njengathi Dubai City Inkampani ifuna umsebenzi yigazi lethu. Ehlangothini elihle ukuthola umsebenzi Emirates nge Dubai City Company kulula. Ekuhloleni kokugcina, chofoza esithombeni ngezansi bese uxhumane nenkampani yase-Emirates.
Ukusebenza Kwamanye Amazwe I-Dubay for Expats kungaba eyakho!
Imisebenzi e-Emirates - Ungathola umsebenzi e-Emirates. Ungu ukufuna amathuba emisebenzi emangalisayo e-Dubai?. Empeleni, wonke ama-expat e-Dubai Ukufuna izikhala ezimangalisayo kusukela ngosuku olulodwa lapho befika khona. Ngakho-ke silapha ukuzokusiza ngokusesha umsebenzi. Enye yezinkampani okufanele uzicabange ekusesheni kwakho kwezemisebenzi yi-Emirates. Kukhona ngisho ne-Emirates esitolo, yebo, ungakwazi ukuyifaka futhi thola izithuba zomsebenzi nazo e-UAE.
Sisebenzela abafuna umsebenzi emsebenzini we Dubai
Ufuna i umsebenzi e Dubai? Okwamanje, ungathola umsebenzi e-Starbucks coffee. Ukubeka ngenye indlela, siyathanda ukusiza ngisho Amawebhusayithi e-Emirates eGulf. Ithemba othanda ukusebenzela izinkampani zase-Emirates. Ngoba uthole umsebenzi omangalisayo e-Dubai noma e-Abu Dhabi.
I-Dubai City Inkampani ifuna abazosha ukujoyina ithimba lomsebenzi eGulf. Ukubekwa kwe-Emirates Jobs kusegazini lethu lesi-Arabhu. Musa ukuchitha isikhathi sakho futhi uthole umsebenzi nathi. Uma ufuna Imisebenzi ye-Gulf ungathumela futhi Qalisa kabusha kwinkampani yethu. Umsebenzi Abroad Dubai manje sekuyizikhathi zokuphuma.
Kunezinketho eziningi zokufuna abafuna umsebenzi emhlabeni wonke e-UAE. Sibonisa abafuna umsebenzi indlela yokuthola umsebenzi e-Dubai. Silapha ukukusiza ukuba ube yisikhathi se-expat ku I-United Arab Emirates. IDubai City Company isiza abathengi abasha abavela eNdiya nasePakistan ukuthola umsebenzi.
Sifuna i-expat wesifazane ku-UAE
Ungathanda ukusebenza ku-BP? Ngenxa yalesi sizathu, sivame ukuvuselela indawo yethu yomsebenzi. Silinde for expat entsha abesifazane kanye nabangaphandle amazwe. Ukuveza ukuthi sifuna iNingizimu Afrika, kanye Indian abaxoshwa abafuna ukubheka umsebenzi eDubai. Ngenkampani yethu, wonke umuntu unethuba lokusebenza eBritish Petroleum. Konke okudingeka ukwenze ukuthumela i-CV kithi. Ikheli le-imeyili linikezwe ngaphezulu kwekhasi.
I-United Arab Emirates ingenye yezintombikazikazi ze-expat. Kungakhathaliseki ukuthi yibuphi ubuzwe obesifazana besifazane, i-Dubai ne-Abu Dhabi banikeza umsebenzi. Ikakhulukazi I-Dubai City Area yenzelwe abesifazane be-expat. Okwamanje indawo ethandwa kakhulu yabaphathi besifazane. Ingabe imisebenzi yamahhotela eDubai ungathola umsebenzi ezikhundleni eziningi. Kusuka emsebenzini oyisisekelo njengentombazane kuze kufike ehhotela labaphathi abaphezulu umphathi izikhala.
Abafuna umsebenzi omusha baqala ukusebenzisa mobile e Dubai
Isikhathi esisha sokufuna umsebenzi nokusebenza kwamanye amazwe e Dubai sekufikile. Ungakwazi thola imisebenzi ngaphezu kweselula e-United Arab Emirates. Manje ku umakhala ekhukhwini, ungenza konke. Isibonelo, ungasebenzisa i-android yakho ukuthola izinkundla ezintsha zomsebenzi. Qala ukuthumela ama-CV kuyo yonke i-UAE ngokuchofoza okukodwa. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi manje ajoyine uDubai. Kubantu abasha abafuna umsebenzi e-Dubai. Ifoni ephathekayo ingenye yethuluzi elihle kakhulu ongayisebenzisa.
Manje ngisho I-Google iqasha izinhlelo zokusebenza zefoni. Ngalokhu engqondweni yakho, kufanele ucabangele imakethe yokuqasha umakhalekhukhwini. Isibonelo, ungakhuluma nabamele izinkampani eziningana. Inkampani yethu iphinde yenze izinsizakalo eziningana. Isibonelo omunye wabo ukhona I-Dubai blog ku-Gulf Region. Konke okudingeka ukwenze ukujoyina amaqembu ethu futhi uthumele i-CV yakho ebuyekeziwe.
Ukusebenza Kwelinye Izwe I-Dubayi Yezindleko.
Sisebenzela izithuthi ngeMpumalanga Ephakathi
Ngakolunye uhlangothi, uma ufuna umsebenzi wezimoto ku Dubai singakusiza. Ngenxa yalesi sizathu, senze leli khasi. Njengoba kuboniswe ngenhla, ithimba lethu livame ukuvuselela izithuba zemisebenzi emisha. Izinkampani zase Dubai zilindele ukhetho olusha lwamazwe omhlaba. Ngokuyinhloko, siyikho manje eqoqa i-Audi eMpumalanga Ephakathi.
Empeleni, uma unolwazi oluvela eNdiya noma INingizimu Afrika ungamukelekile kakhulu. Ngakolunye uhlangothi, ukhetho lwethu olusha olufuna ukuqala umsebenzi e-Dubai. Ngokusobala angasebenza ngokuqhubekayo okuvuselelwe. Sicela futhi uthumele incwadi yesikhombi ebuyekeziwe ku-nkampani yethu.
Lezi zinsuku zonke izifiki zinezithuba zokusebenzela kwelinye izwe e Dubai nase thola futhi ufake isicelo emisebenzi ye-UAE. Wonke umuntu umenyiwe ukuthi alayishe kabusha. Ingabe uke ube nethuba lokusebenza ku-Automotive Industry ?. Sicela uthumele i-resume kubaphathi bethu abaqashisayo. Siphinde sibe nezinye izindawo ezimbalwa zemisebenzi ezitholakalayo ezifunayo zabasebenzi bamazwe ngamazwe.
Ukusebenza Kwelinye Izwe e Dubai ngePetroleum
Abayena kuphela Abafuna Imisebenzi Yomhlaba Wonke
Ungathola umsebenzi e-Dubai nge-Industry Oil and Gas. Lo mkhakha ukhula ngokuqinisekile ibhizinisi e-UAE. Isibonelo, ungaqala ukusebenza phesheya eDubai nase-Abu Dhabi. Ikakhulu izinkampani ezise-Abu Dhabi eziqasha abantu abaqokelwa izinkampani zikaphethiloli eQatar nase-Abu Dhabi. Ngakolunye uhlangothi, izindawo ezithandwa kakhulu ukuthola izinkampani ezisebenzayo yi-Saudi Arabia. Ama-expatriates kanye nabafuna imisebenzi abavela kuwo wonke umhlaba bathande lokhu indawo.
Omunye umqondo ohlakaniphile ukuthola umsebenzi ukuthola ingxoxo yokuhamba e Dubai. Yenye yezindlela ezinhle kakhulu zokuxhumana nabaphathi ngaphakathi kwe-UAE. Futhi yilokho okutholayo okungcono kakhulu i-Dubai City Companies. Abafuna imisebenzi kumele baqaphele ngenxa yezinkampani eziningi zaseMpumalanga Ephakathi. Manje sisiza ukuthola umsebenzi e-Qatar Petroleum, Dubai nasezinkampanini ze-Abu Dhabi Oil. Inhloso yethu ukukuxhuma namhlanje nabaqashi.
Imisebenzi e Dubai nge-Filipino Expats
I-Duba City City iphinde isebenze ngemisebenzi yezithuba e-UAE. Uma ufuna ukuqashwa yi-Dubai Companies. Silapha ukuzokusiza. Ngokuhamba kwesikhathi, uma ujoyina inkampani yethu ungathola umsebenzi omusha e-Dubai. Sisebenzela imisebenzi eminingana e-UAE. Ungakwazi sebenza kwelinye izwe e-Dubai njengesiFilipino E-Dubazini baqashisa ukuthenga.
Kungaleso sizathu lapho abaphambukeli eDubai beqhubekela khona. Inkampani yethu yokuqasha e-UAE iyasiza Filipino expats. Nakanjani, sikusize ekutholeni umsebenzi eDubai City njengesisebenzi sasePhilippines. Wonke umuntu ofuna umsebenzi wamazwe omhlaba, ngamafuphi, unethuba lakhe lokusebenza eDubai. Isibonelo, manje sesikhona ukuqashelwa imisebenzi yomfundisi e-Dubai. Ngoba eMpumalanga Ephakathi kunezithuba eziningi zokuthutha abantu abavela emakhaya.
Empeleni, silinde kulabo abathintekayo abanezemfundo ye-MBA. Ngoba e Dubai kubaluleke kakhulu. Umfundi ophakeme wezemfundo esinawo. Lokho kuyoba lula ngathi ukuwabeka.
Izinsizakalo zokuSebenza ze-Job Premium e-Dubai?
Ubufakazi obuningi obunamandla bokuthi i-Dubai yiyona engcono kakhulu yimiholo ephezulu yezidingo. Ungakhathazeki nge-CV yakho sicela usithumelele namhlanje. Ithimba lethu lizokusiza nakanjani ukuqala kwakho Ukufuna umsebenzi ngokucacile e-Emirates. Ngokumangalisa lokhu kunganikezwa ngezinsuku ze-60. Sisiza amazwe amaningana emhlabeni ukuba abekwe e-UAE.
Ekuhambeni kwesikhathi, siyindlela ewukuphela ukusesha umsebenzi wakho ku-UAE njengomqashi womsebenzi waseNdiya. Kungani sinikeza izinsuku ze-60 ?. Sizokubonisa indlela yokufuna umsebenzi. Siyakwazi ukukuxhuma ngokuqasha abaphathi. Njengoba kuye kwaphawulwa nje ukulinda izibuyekezo zokuxhumeka kuvele ngokugcwele. Futhi ube isisebenzi esivele sijabule e-Dubai.
Sineyodwa yenkampani emakethe engabheki abafuna umsebenzi. Sifuna nje ukusiza abantu ukuthola umsebenzi wephupho e-Dubai. Kodwa esimweni ukuthi asizisi ozobhapathizwa. Sithumela imali yakho ku-akhawunti yakho. Ngokuvamile, ithimba lethu likusiza ngomsebenzi kwenye indawo e-Dubai.
Ngubani, yini, ngani, nini, kuphi?
I-Dubayi Njengendawo Yendawo Yobubi - Yonke Okudingeka Uyazi
IDubai, izwe lesibili le-United Arab Emirates (UAE) ngokuya ngosayizi, IDubai, iyisizinda somnotho womhlaba. Abantu abaningi baphupha bafuna imisebenzi endaweni ikakhulukazi ngezinzuzo abangazithola lapha kufaka phakathi izikali zokukhokha okuhle, isiko lomsebenzi omuhle, indlela yokuphila enethezekile, imali engenayo intela nendawo enhle yakhona. Ungomunye wamazwe akhululeke kakhulu owaziwa ngamanani awo aphezulu athuthukayo. Kungenzeka futhi ukuthi ama-expats abe ngumnikazi wesakhiwo esifundazweni saseDubai, ngokungafani nezinye izizwe zase-Middle East. Lokho kuyenza ibe ngeye ukukhetha okuphezulu kwabafuna umsebenzi abavela emhlabeni wonke abafuna umsebenzi kule ndawo.
Imikhakha ehlukene yokuqashwa e Dubai
Iningi lamazwe achuma eMiddle East athembela kuphela kumafutheni njengohlaka oluyisisekelo lomnotho wawo. Kepha izinto zeDubai azifani. Eziningi ezinye izimboni zisathuthuka eDubai, ukuheha abafuna umsebenzi abavela e-India, Pakistan, Bangladesh nakwezinye izingxenye eziningi ze-Asia ukuthi basebenze emikhakheni ekhulayo. Izimboni eziphambili ngaphandle kwe-oyili negesi njengamanje ukuchuma eDubai kufaka phakathi ezokuvakasha, ezokwakha, izinsizakalo zezezimali kanye nokuthengiswa kwezakhiwo phakathi kwezindawo eziningi.
Imali nezinye izinzuzo
Imholo ephezulu kanye nezinsizakusebenza ezingenayo intela kwenza i-Dubai ibe ngeyodwa ephezulu izinketho zama-expats ukukhetha i-Dubai njengenye yezindawo eziphumelela kakhulu ukusebenza. Ukukhuluma iqiniso, iDubai ingesinye sezindawo ezikhokha kakhulu phakathi kwazo zonke ezinye izingxenye ze-UAE. Imivuzo ingasukela endaweni ethile ezungeze i-AED 75,000 yenyanga yabaphathi ejwayelekile yezobuchwepheshe noma abaphathi bezinto zokuhlinzeka abasebenza ezimbonini zobunjiniyela, uwoyela negesi. Umqondisi omkhulu embonini yezokwakha angakwazi ukufaka i-AED 80,000 cishe njalo ngenyanga. Kepha ibanga lokuqalisa lokuholelwa kwabaphathi nonjiniyela lingaqala noma kuphi phakathi kwe-AED 12,000 liye ku-AED 15,000 njalo ngenyanga. Kunezici eziningi lapho iholo lanyanga zonke labantu abafuna umsebenzi lingancika. Ezivame kakhulu zifaka:
Iningi lemisebenzi ekhokhela izinkokhelo eziphezulu zezinsizakalo futhi ihambisane nezinye izinto eziningi ezifana nokuhlala kwamahhala, izikweletu zamaselula, izimoto kanye nethikithi elilodwa elilodwa phakathi kwamanye amaningi.
Yize amaphakheji omholo angase akhangele wonke amathuba emisebenzi endaweni, kuvame ukuza nezindleko ezengeziwe. Izindleko zokuphila nazo ziphakeme futhi kubalulekile ukuba abafuna umsebenzi bazinake lokho. Kungathatha cishe i-AED 9000 ngenyanga ngokuqasha indlu yekamelo lokulala le-2. Amanani aphezulu ngisho nakwabantu abangahlanjululwayo, kusukela ku-AED 7000 esendlini yokulala ye-2. Kungenzeka ukuthola igumbi ezindaweni eziningi ezabelwana ngazo zakha ngaphesheya kwedolobha elizungeze i-AED 2000.
Ngamanani ancishisiwe kaphethiloli nawokulungisa izimoto, kuyindlela enhle yokuthenga imoto yokuhamba. Inketho yokuqasha imoto njalo ngenyanga ibanga nge-AED 1500 yemoto encane hatchback. Ngenkathi amatekisi angakhokhisa azungeze i-AED 2 ngekhilomitha, umuntu ngamunye angakwazi ukuthola amabhasi enkaba yedolobha cishe ngokulingana nalo lonke uhambo olufanayo.
Ngenye into ebalulekile okufanele uyicabangele izingane. Ngenkathi abantu bebodwa bachitha isikhathi esiningi emisebenzini yabo besebenza kanzima ukuthola i-AED ngayinye, asikho isikole sikahulumeni esizothatha izingane ezikhululiwe ngenxa yemfundo. Kufana nes protocol nguHulumeni Wezwe waseDubai. Lokho kwenza ukuthi izikole ezizimele nezamazwe jikelele kube yiyona ndlela kuphela yokuthi izaphulelo ziphendukele emfundweni yezigceme zazo. Kepha izindleko zokufunda nokukhokhisa ziphezulu kakhulu, zisukela ku-AED 90,000 unyaka nonyaka, ikakhulukazi ezikoleni zamazwe aphambili endaweni yamawadi wangaphandle.
Njenganoma yimuphi omunye wesizwe samaSulumane, isonto elisebenzayo eDaily liqala kusukela ngeSonto kuze kube ngoLwesine ezinkampanini eziningi. Kwezinye izitolo zokudayisa nezinye amabhizinisi athile, isonto elisebenzayo liqala kusukela ngoMgqibelo kuya ngoLwesine, uLwesihlanu (usuku olungcwele lamaSulumane) lubekwe masonto onke njenganoma yimuphi omunye izwe lamaSulumane. Amahora okusebenza nawo ayaziwa ukuthi ahluka kusuka embonini kuya embonini. Amahora ebhizinisi ngokuvamile aya kusuka ku-8 AM ekuseni kuya ku-1 AM ntambama elandelwa ukuphumula kwamahora amathathu. Umsebenzi uzophinde uqale ku-4 PM futhi uzoqhubeka namanye amahora we-3 kuze kufike i-7 PM Kubuye kube nokuhlukahluka kwezinhlangano zebhizinisi zamazwe ngamazwe ezivame ukusebenza ngewashi le-9 AM kuya ku-6 PM Kunciphisa amahora okusebenza phakathi nenyanga I-Ramadan.
Abafuna umsebenzi abanentshisekelo bangaphendukela ezikhungweni zemisebenzi eziningi eziku-inthanethi nezinhlangano zokuqasha bafuna amathuba avulekile. Bangase futhi basebenzise iwebhusayithi yenkampani ukuze bazi kabanzi ngezindawo ezikhona nezikhala zomsebenzi ezikhona. Enye inketho kungaba ukuthunyelwa ngabangane, abantu obajwayele noma ukusebenzisa ucingo olubandayo ukuthola ezinye izinkomba.
Amathiphu Wokuthola Umsebenzi ku-UAE
Abantu baya e-UAE ngenxa yezizathu ezihlukile, okubaluleke kakhulu, ekuzingeleni imisebenzi. I-UAE kungenye yezindawo ezihamba phambili zebhizinisi nezokuvakasha. Lesi sifunda sikhule ngokushesha ngenxa yendawo yaso kanye nezindlela zokuphatha ezisebenzayo. Njengazo ezinye izifunda, ukuqashwa kuyimbangela ehamba phambili yokufuduka kwabantu emadolobheni. Yize kungukuthuthuka kweqiniso nokukhula kwengqalasizinda kuhlangene namathuba emisebenzi, ukuthola umsebenzi e-UAE akusona isiqinisekiso.
Amathuba emisebenzi ahlukene kodwa adinga okungaphezu kwamakhono akho neziqu zakho. Indlela owenza ngayo isicelo, lapho usebenza khona, lapho usebenza khona, nokuthi ungasondela kanjani kumqashi kuzo zonke izici ezenza umsebenzi wokuzingela umsebenzi uphumelele. Abanye abantu banombono omubi mayelana ne-UAE nokutholakala kwemisebenzi nje ngoba abazi ukuthi bangayenza kanjani. Abanye bathola umsebenzi ngamaholo aphansi.
Nanka amathiphu okuthola umsebenzi ku-UAE.
I-UAE indawo eyingqangi; iqiniso lokuthi abatshalizimali bayalanda ngenxa yokukhula okungaba khona esifundeni; kunamathuba amaningi okuqashwa. Kodwa-ke, akukho lutho olusobala ngokuthola umsebenzi esizweni saseArabia. Kufanele wazi uhlobo oluthile lwamakhono nezinga lesipiliyoni elidingeka kumakhono ahlukahlukene. Futhi, kufanele wazi izinga elijwayelekile lobuchwepheshe obudingwa izinkampani embonini ngayinye yezimboni.
Vele, uyakudinga amakhono afanele ukuze uthole umsebenzi noma kuphi emhlabeni. E-UAE, kungaphezu kwesidingo. Uma ufuna umsebenzi ofanele nenkampani eyaziwayo, udinga amakhono afanele. Isikhathi eside, abasebenzi baseAsia bebelokhu befunwa kakhulu; isifunda manje sesigcwele abagibeli base-Asia, ngokuhamba kwesikhathi, isidingo sabafundi abanjalo sehlile. Futhi, amandla okuxoxisana kwabaqashi e-UAE aphezulu; lezi yizici ezibalulekile zomhlaba wobumbano esizweni sama-Arabhu.
Ucwaningo lubalulekile. Eqinisweni, kufanele wenze izinhlelo zakho zokusebenza futhi ulungiselele amadokhumenti adingekayo ngenyanga ngokuvakashelwa okuhlosiwe. Iningi izinkampani esifundeni cishe zizokufaka esikhathini sokuhlola isikhathi seviki le-3. Kufanele ulungele izimo ezinjalo. Yenza umsebenzi wesikole wakho kahle.
Thola indlela efanele yokufaka isicelo
Ukufaka isicelo somsebenzi e-UAE kungenzeka kungathandi ukuba sezweni lakho. Indlela yokufaka isicelo lapha icacile. Ukuthumela i-CV eyodwa kungenzeka kungasondeli nasenqubo yenhlolokhono. Empeleni, kufanele ufake isicelo semisebenzi ehlukile futhi uqiniseke ukuthi ufaka incwadi yekhava. Ngaso sonke isikhathi ngaphambi kokuthumela i-CV nencwadi eyikhava, kufanele ubukeze i-CV ngayinye kahle.
Ngokungafani namanye ama-CV, udinga ukuhlinzeka ngemininingwane ye-VISA yakho. Usuku lokuqala kanye nokuphelelwa yisikhathi luyimpoqo. Isizwe siphathwa ngabasebenza kwamanye amazwe yingakho sineso elibukhali labaqashi kuleyo mininingwane yokuqinisekisa kwabantu ababandakanyeka ebhizinisini labo. Ngokusobala, kufanele uqokomise amakhono ahambelana nomsebenzi owufaka isicelo. Ngaphandle kwalokho, kulindeleke ukuthi ufake izethenjwa ku-CV yakho noma incwadi eyikhava, kukhulisa ukuzethemba komqashi yingakho amathuba aphezulu akho okuthola umsebenzi. Ngamathuba angcono, sebenzisa yonke imisebenzi etholakala emkhakheni wakho wobuchwepheshe.
Umthelela wezokuxhumana komphakathi awunakwa. I-UAE njengomnotho okhula ngokushesha ibhekane nenguquko ngenxa yobuchwepheshe. I-Intanethi ayizange ibe nomthelela embonini yamabhizinisi kuphela kepha nakumabhizinisi wezwe. Abaqashi bathola kancane kancane amapulatifomu e-inthanethi okwenziwa izingxoxo nawo. Eqinisweni, izinkampani eziningi zizokudinga ukuthi ugcwalise amafomu online, unamathisele i-CV yakho, bese ulinda ukuxhumana.
Uma ucabanga ukufaka isicelo somsebenzi e-UAE, kufanele uqale ngokubukeza amaphrofayili akho emidiya yokuxhumana nomphakathi. Kufanele kube uchwepheshe; Gwema isithombe nokuthunyelwe okungabeka engcupheni ubuqotho bakho. Umqashi angavele alahlekelwe yithemba nawe noma akhe umbono ongemuhle ngenxa yohlobo lokuthunyelwe kumaphrofayela wakho wezindaba zokuxhumana.
Futhi, abaqashi baqasha ngokusebenzisa amaphrofayli emidiya yezenhlalo afana ne-LinkedIn. Kufanele wenze ngokwezifiso iphrofayili yakho ukuze ifane nezidingo zomqashi kanye nokulindelwe. Kwiphrofayela yakho, yenza ngokwezifiso okuqukethwe ngamagama okhiye athile ahlobene nenkambu yakho yobuchwepheshe. Abaqashi bachitha isikhathi kwabezindaba zenhlalo ngesikhathi senqubo yokuqasha Ukuhlola ubungcweti kanye nekhono labaqashi abazimele. Noma yikuphi okuthunyelwe okungadingekile nokuzijabulisa okungabeka engcupheni esithombeni sakho kufanele kususwe.
Gcwalisa amafomu kumawebhusayithi
Izinkampani eziningi e-UAE zidinga ukuthi ugcwalise imininingwane kumawebhusayithi athile. Iningi lemininingwane ibonakala ingadingekile futhi iyisidina, ungavumeli ukuthi lokhu kukuphazamise. Izinkampani kungenzeka zingathandi ukuvuselela amafomu ukuze ahambisane nezidingo ezahlukahlukene zokuqashwa okusho ukuthi balindele ukuthi unikeze yonke imininingwane. Kungacasula ukuphinda imininingwane ethile kodwa kudingeka ukwenze uma kufanele uthole umsebenzi e-UAE.
Qiniseka ukuthi ulandela lezi zeluleko ze-4 ukuze uvikele umsebenzi omuhle e-UAE.
Isimo sesibili se-United Arab Emirates (UAE) ngokuya ngosayizi, IDubai, iyisizinda somnotho womhlaba. Abantu abaningi baphupha bafuna imisebenzi endaweni ikakhulukazi ngezinzuzo abangazithola lapha kufaka phakathi izikali zokukhokha okuhle, isiko lomsebenzi omuhle, indlela yokuphila enethezekile, imali engenayo intela kanye nenkundla yayo ebabazekayo. Ungomunye wamazwe akhululeke kakhulu owaziwa ngamanani awo aphezulu athuthukayo. Kungenzeka futhi ukuthi ama-expats abe ngumnikazi wesakhiwo esifundazweni saseDubai, ngokungafani nezinye izizwe zase-Middle East. Lokho kuyakwenza enye yezinketho eziphezulu zabantu abafuna umsebenzi abavela kuwo wonke umhlaba ukuthi bazofuna umsebenzi kule ndawo.
Iningi lamazwe achuma eMiddle East athembela kuphela kumafutheni njengohlaka oluyisisekelo lomnotho wawo. Kepha izinto zeDubai azifani. Eminye imikhakha eminingi isakhiwa eDubai, ukuheha abafuna umsebenzi abavela ePoland, India, Pakistan, Bangladesh kanye nezinye izingxenye eziningi ze-Asia ukusebenza emikhakheni ekhulayo. Izimboni eziphambili ngaphandle kwe-oyili negesi njengamanje ukuchuma eDubai kufaka phakathi ezokuvakasha, ezokwakha, izinsizakalo zezezimali kanye nokuthengiswa kwezakhiwo phakathi kwezindawo eziningi.
Imholo ephezulu kanye nezinsizakusebenza ezingenayo imali yentela kwenza iDubai ingenye yezinqumo eziphezulu zokubekisa ekukhetheni i-Dubai njengenye yezindawo eziphumelela kakhulu ukusebenza. Ukukhuluma iqiniso, IDubai ingesinye sezindawo ezikhokha kakhulu phakathi kwazo zonke ezinye izingxenye ze-UAE. Imivuzo ingasukela endaweni ethile ezungeze i-AED 75,000 yenyanga yabaphathi ejwayelekile yezobuchwepheshe noma abaphathi bezinto zokuhlinzeka abasebenza ezimbonini zobunjiniyela, uwoyela negesi. Umqondisi omkhulu embonini yezokwakha angakwazi ukufaka i-AED 80,000 cishe njalo ngenyanga. Kepha ibanga lokuqala lokuholelwa kwabaphathi nonjiniyela lingaqala noma kuphi phakathi kwe-AED 12,000 liye ku-AED 15,000 njalo ngenyanga. Kunezinto eziningi lapho iholo lanyanga zonke labantu abafuna umsebenzi lingancika kulo. Ezivame kakhulu zifaka:
Yize amaphakheji emiholo engakhanga wonke amathuba emisebenzi endaweni, imvamisa iza nezindleko ezingezekile. Izindleko zokuphila nazo ziphezulu futhi kuyadingeka ukuthi abafuna umsebenzi bakubhekele lokho. Kungathatha cishe i-AED 9000 ngenyanga ukuqasha indlu enamagumbi okulala eyi-2. Amanani aphakeme kakhulu ngisho nangawodwa ongashintshiwe, asukela ezungeze i-AED 7000 yendlu yokulala ye-2. Kungenzeka ukuthola igumbi ezindlini eziningi ezabiwe zakha ngaphesheya komuzi ezungeze i-AED 2000.
Ngezindleko ezincishisiwe zikaphethiloli nokugcinwa kwemoto, kuyindlela enhle yokuthenga imoto yokuthutha. Inketho yokuqasha imoto ngezigaba zenyanga zonke ezungeze i-AED 1500 emotweni encane. Ngenkathi amatekisi engakwazi ukukhokha azungeze i-AED 2 ngekhilomitha, abantu bangasebenzisa amabhasi asezindaweni zedolobhana cishe cishe ngezinga elifanayo lonke lohambo.
Kungenye into ebalulekile okufanele uyicabangele ezinganeni. Ngenkathi abantu bebodwa bachitha isikhathi esiningi emisebenzini yabo besebenza kanzima ukuthola i-AED ngayinye, asikho isikole sikahulumeni esizothatha izingane ezikhululiwe ngenxa yemfundo. Kufana nes protocol nguHulumeni Wezwe waseDubai. Lokho kwenza izikole ezizimele nezamazwe amazwe okuphela kwendlela okukhethwa ngayo ukuphendukela emfundweni yezigceme zabo. Kepha izindleko zokufunda nokukhokhisa ziphezulu kakhulu, zisukela ku-AED 90,000 unyaka nonyaka, ikakhulukazi ezikoleni zamazwe aphambili endaweni yamawadi wangaphandle.
Njenganoma yisiphi esinye isizwe samaSulumane, isonto lokusebenza eDubai Kuqala ngeSonto kuya kuLwesine ezimbonini eziningi. Kwezinye izindawo ezithengisa kanye namanye amabhizinisi athile, isonto lokusebenza liqala kusuka ngoMgqibelo kuze kube uLwesine, uLwesihlanu (usuku olungcwele lwamaSulumane) oluba ngesonto njengakwelinye izwe lamaSulumane. Amahora okusebenza nawo ayaziwa ukuthi ahluka embonini nakwezimboni. Amahora webhizinisi avame ukusukela ku-8 AM ekuseni aye kwi-1 AM ntambama alandelwe ikhefu lamahora amathathu. Umsebenzi uzobe uqalwa kabusha e-4 PM futhi uzoqhubeka amanye amahora we-3 kuze kube yi-7 PM Kukhona futhi umehluko ezinhlanganweni zamabhizinisi aphesheya ezisebenza ngokujwayelekile ngewashi le-9 AM kuye ku-6 PM Kunokwehliswa kwezikhathi zokusebenza phakathi nenyanga ka IRamadan.
Unentshisekelo abafuna umsebenzi bangaphendukela ezikhungweni zemisebenzi eziningi eziku-inthanethi kanye nama-ejensi wokuqasha abantu abafuna amathuba avulekile. Bangase futhi basebenzise iwebhusayithi yenkampani ukuze bazi kabanzi ngezindawo ezikhona nezikhala zomsebenzi ezikhona. Enye inketho kungaba ukuthunyelwa ngabangane, abantu obajwayele noma ukusebenzisa ucingo olubandayo ukuthola ezinye izinkomba.
Imisebenzi E-Dubazini - Yini Okumele Yikhethe Futhi Indlela Yokukhetha?
Kuyinto baphupha abantu abaningi baphile futhi basebenze esifundazweni saseDubai. Kepha kungaba nzima impela ukuvikela umsebenzi omuhle lapho uma umgadli engenalo ulwazi olufanele lokuthi izinto zisebenza kanjani e-UAE. Siveze isethulo esiyisisekelo sezimo ezifanele kakhulu fnoma imisebenzi kanye nokuqashwa esifundeni.
IDubai ingenye yamalungu abaluleke kakhulu e-7 emirates ye-United Arab Emirates (UAE). U-Emir, umbusi ozimele uphethe isifunda samakhosi, esisendaweni eseningizimu nePersian Gulf. Uma kukhulunywa ngezifunda ezicebile ze-UAE, iDubai ngomunye wabaholi abakuloluhlu.
Imboni kawoyela iyaqhubeka nokuba ngumgogodla womnotho wakulesi sifunda. Umcebo oyinhloko waseDubai kungenxa yemithombo yawo enkulu yamafutha emvelo. Izindawo ezinkulu ezinayo yaphenduka iDubai yaba ngomunye wabakhiqizi abahamba phambili bamafutha emakethe yomhlaba wonke. Yize iyisisekelo somnotho wezwe, i-Dubai ayikaze ithembele kulo kuphela ngokukhula kwayo. Kuneminye imikhakha eminingi ekhuphukayo eyenza le ndawo ibe ngesinye sezifunda ezikhula ngokushesha emhlabeni. Eminye imikhakha iDubai okwamanje echuma kuyo ifaka:
I-Technology Technology (IT) phakathi kwamanye amaningi.
Umsebenzi wase Dubai
Ngomfutho wale mikhakha eminingi ethuthukayo, IDubai ilethe izikhala zamathuba amaningi emisebenzi. Ngaphezu kwalokho, amanani akhokhelwa kakhulu, le misebenzi enenzuzo enkulu imema abantu abaningi abafuna imisebenzi emhlabeni wonke unyaka ngamunye. Ngeziqu ezifanelekileyo nezinga lesipiliyoni, abantu abamele ukhetho bangayithola le misebenzi ngokukhululeka. Imisebenzi nayo idinga amakhono okukhuluma isiNgisi ezimeni eziningi.
Iziqu ezidingekayo emisebenzini
Iziqu zomkhakha ngamunye zihluke ngokusobala. Izindinganiso ezivame kakhulu zihlanganisa:
Imfundo - Izikhungo zemfundo zisungulwa zonke izinsuku zenza imisebenzi yokufundisa ibalwe. Abafundi kumele babe ne-bachelor degree nganoma yikuphi isihloko esinokuhlonipha okungenani okumele sisebenze emisebenzini. Isiqu se-B.Ed siyadingeka ngempela. Abafundi abanolwazi lokufundisa ezikhungweni zemfundo (kunoma iyiphi indawo) banamathuba okugqoka emsebenzini.
IT - IDubai idume ngohlaka lwayo lomhlaba nolusezingeni eliphezulu. Unxuse amafemu amaningi e-IT adumile ukuthi avule izisekelo esifundeni. Abavunyelwe abane-bachelor's noma degree's master emkhakheni wezinhlelo zekhompyutha bavumelekile ukufaka isicelo semisebenzi ye-IT kuzinkampani eziningi ezihlonishwayo ze-IT esifundeni kufaka i-IBM, i-Oracle ne-Microsoft. Isitifiketi sediploma kunoma yiliphi ikhono elifanele esikhungweni esidume ngokwengeziwe sithuthukisa amathuba okukhethwa. Abaviwa abanokuhlangenwe nakho kweminyaka engu-4 + bakhethwa kakhulu.
tekutsengisa -I-Dubai yaziwa futhi njengedolobha lokuthenga phakathi kwazo zonke izifunda zaseMiddle East, ikakhulukazi ukwanda kwesibalo sezindawo zokuthenga ezitolo kule ndawo. Njengamanje kunezitolo ezinkulu ezingaphezu kwe-70 nezitolo eziningi zeminyango ezingenakubalwa, izitolo nezindawo zokuphumula ezisebenza esifundeni. I-MBA degree evela esikhungweni esidumile ingenye yezinto eziyisisekelo Izidingo zokufaka umsebenzi omuhle embonini yezitolo. Isitifiketi sediploma kwizifundo zokuphathwa kwezitolo kukhulisa amathuba okukhethwa.
Hospitality - Abavunyelwe abaphethe i-bachelor's degree in management management bafanelekile ukufaka isicelo semisebenzi ehlukahlukene kulo mkhakha.
Izindawo ze-Dubai UJobe
Indlela engcono kakhulu ukufuna umsebenzi eDubai ngokusebenzisa inthanethi umsebenzi inthanethi. Lezi zingosi ezinikezwe umsebenzi zivumela abasebenzisi ukuthi baseshe imisebenzi ngokusekelwe emazweni. Abasebenzisi bangabapheqa ukuze babheke ukunikezwa kwe-Dubai abakuthola kukhanga. -Google Yebo, enye inketho ethembisayo yokugcina umzamo nesikhathi. Abasebenzisi bayadingeka ukuthi bakhe i-akhawunti kulezi zingosi ezize ohlwini lokucinga ukuze zizibhalise futhi faka isicelo sokunikezwa kwemisebenzi eminingi. Yize iningi lamawebhusayithi elihlinzeka ngemisebenzi yamahhala, ukujoyina ubulungu be-premium nokubhalisele okukhokhelwayo kuthuthukisa amathuba wokuthola amathuba amahle kakhulu.
Ama-Employment Consultancy amafemu e-Dubai
Kungenye indlela abantu abafuna umsebenzi abangaphendukela kuyo ukuthola izixazululo ezisebenzayo eDubai. Kukhona izibalo ezinkulu ze izikhungo zokuqasha setha ku-emirates enikeza usizo kulabo abafuna umsebenzi. Lapho abantu abazongenela ukhetho behlinzeka amafemu ngemininingwane yabo - baphinde baqhubeke nezitifiketi (zezemfundo nezobungcweti), bazofuna umsebenzi ofanele kakhulu ngokwekhono lomele ukhetho. Banikeza abaningi ezinye izinsizakalo ezinjengamathiphu ekubhaleni kabusha, umhlahlandlela ngamathemba womsebenzi esifundeni, ukulindelwa kwesakhiwo samaholo nokusetha iphrofayili efiselekayo phakathi kwemisebenzi eminingi eminingi. Amafemu amaningi ngokuvamile akhokhisa abazobamba imali encane ngokuwasiza ngezinsizakalo zawo zonyaka.
Izindlela Ezinhle Zokuthola Umsebenzi Ophephile E-Dubai
IDubai mhlawumbe ingenye izindawo ezimbalwa ezisele emhlabeni lapho kunombukiso wokuqashwa osebenzayo. Okungenani leyo ndlela okuzwakala ngayo kubahlali bakwezinye izingxenye eziningi zomhlaba kufaka phakathi i-India, UK ne-USA ikakhulukazi ngemuva kokuncishiswa kwemisebenzi ejwayelekile evela ezinkampanini eziningi eziholayo ngesikhathi sokusatshiswa kokwehla komnotho.
Ngenxa yalokho, kunentshiseko enamandla yokusebenza phesheya, ikakhulukazi eDubai, izwe eliyinduna laseMiddle East e-United Arab Emirates. Lokhu kungenxa yokuthi indawo inikeza okhululiwe wentela Indlela yokuphila kubaphathi bomhlaba jikelele. Abaqashi abavela eDubai basenazo izikhala zokubhaka bonke abantu abafanelekayo emhlabeni wonke ngamabhizinisi amaningi.
Kepha umbuzo omkhulu osekhona ukuthi ungawuthola kanjani umsebenzi kanye ne-visa yokuhamba uyosebenza lapho njengesisebenzi sase-Algeria. Ukuxazulula le nkinga, size nezindlela ezivelele kakhulu lapho abafuna umsebenzi wamazwe omhlaba bezama ukuthola umsebenzi omuhle kungenye yezindawo ezifiseleka kakhulu emhlabeni.
Iningi lezinhlangano ezizinze eDubai zifuna ukuqasha kakhulu unyaka nonyaka, ikakhulukazi ezifundeni ezifana neNdiya ne-UK. Ukudalulwa kwemisebenzi kwenziwa kulezi zindawo njalo ngonyaka. Lokhu kuza nethuba elilodwa lokuvakashela futhi uhlangane nalabo abangaqasha kabusha kunoma yimuphi imboni efanelekile ukuthola ukuthi hlobo luni lwamathuba olunikezwayo. Lokho kufaka nokwazi amaphakheji weholo nawo wonke amanye amanani atholakalayo. Abafuna imisebenzi futhi bangaphendukela kubanikezeli bezinsizakalo bochwepheshe ukuze bafuduke kwamanye amazwe futhi uqoqe ulwazi oluthile ngokuthola i visa ukuze basize bahambe futhi basebenze esimeni sobukhosi. Lokhu kudalulwa kunikeza abantu abaningi indlela yokubheka impilo entsha nokusetha umsebenzi wabo eMiddle East. Ngenye yezindlela ezinhle kakhulu zokuthola imininingwane eyabelwe nabaqashi emikhakheni efanele yemisebenzi.
Ngenye indlela elula yokubheka izikhala ezitholakalayo namathuba avulekile eDubai. Kunezinto eziningi ezenziwa eDubai izinhlangano zokuqasha ezinikeza amathuba emisebenzi afanele kubafundi ukuba nephrofayili efanelekile. Bangathintwa ngewebhu futhi bacelwe izinsizakalo zabo. Ama-ejensi athile futhi asungulwa emazweni anjenge India nePakistan asebenza ukuhlinzeka ngosizo lokuqashwa kubahlali bendawo yamathuba asekelwe eDubai. Lezi zinhlaka zingakhokhisa imali ebizwayo yonyaka ngezinsizakalo eziningi abazinikeza abafuna umsebenzi kufaka namathiphu wokubhala phinda futhi baphrofayele ukhetho ngendlela efanele. Kunezindawo eziningi zomsebenzi eziku-inthanethi futhi nalabo abafuna umsebenzi abangabheka. Impela izingosi zinikezelwa kuphela ngemisebenzi esekwe eMiddle East futhi eze nenketho evumela abasebenzisi ukuthi babheke yonke imisebenzi etholakalayo ngokuya emazweni okuya kuwo.
Isikali esikude kubaqashi
Kungenzeka futhi ukuthi abafuna umsebenzi abavela emhlabeni wonke bakwazi ukuxhumana nabaqashi ukude ngewebhusayithi yenkampani neminye imininingwane yokuxhumana. Kungahle kube inqubo ethatha isikhathi ngaphandle kokuqinisekiswa okuningi kepha kusindisa abafuna umsebenzi ebuhlungwini bokuvakasha okuphindaphindwe ezinhlanganweni zokuqashwa kanye namacala abo okuqamba. Futhi, kukhona izinhlangano ezithile ezingamanga ezinganikeza insizakalo yangempela naphezu kokuthatha izindleko zesevisi. Ukuqondisa kude abaqashi kuvimbela abavoti ekuthini basebenzise izisulu ezinhlanganweni ezinjalo futhi Iqinisekisa amathuba emisebenzi angempela anikezwe ngokuqondile yinhlangano. Abavunyelwe bangafuna iwebhu ukuthola izimboni ezifanele emkhakheni othize futhi baseshe noma yimaphi / wonke amathuba avulekile okwamanje atholakalayo ukuze abathengi basebenze eDubai. Abavoti bangafaka nje isicelo kwiwebhusayithi ngokuqhubeka kwabo nencwadi yokubhala ebeka zonke iziqu, amakhono nobungcweti nokuthi yini ebenza babe yilungu elifanele umsebenzi. Uma ngabe abaqeqeshi benentshisekelo, bazoxhumana ngqo nabaqokiwe, belondoloze isikweletu esiphakathi.
Ukuba ngokomzimba endaweni
Yize kungazwakala kuyinto engenakwenzeka, kungenye yezindlela ezinhle kakhulu zokuzingela umsebenzi eDubai. Kungathatha umzamo omkhulu kanye nezindleko kepha ukuba khona ngokomzimba kwe- ukusesha umsebenzi kungaba yisinqumo esihle sokubheka ithuba elifanele ku-UAE. Abavunyelwe bangaphetha ikhophi yokuqhubeka kwabo kabusha nayo yonke imininingwane yeziqu, amakhono namanye amadokhumenti ukukhuphuka kwenhlangano bese kufakwa isicelo ngokomzimba kunoma yiliphi ithuba elivulekile emkhakheni ofanele. Isheduli yokusebenza ingahlukahluka kwenhlangano ngokuya kwinhlangano yebhizinisi. Ngenkathi enye inhlangano yamabhizinisi endawo isebenza ngewashi le-8 AM ukuya kwi-7 PM ngekhefu lehora le-3 phakathi, amabhizinisi angaphakathi asebenza nge-9 AM kuya kumawashi we-6 PM. Njengoba uLwesihlanu eyimpelasonto esemthethweni kubo bonke, eminye imikhakha isebenza ngomjikelezo weSonto kuya kuLwesine futhi.
Lezi yizindlela eziphezulu zokuthola umsebenzi e-Dubai. Ezinye izindlela zibandakanya ukudluliselwa kusuka enkundleni yomuntu siqu noma ngezikhangiso zokuqashwa ezibekwa yizinkampani.
Yini Eyenza Dubai Ikhethele Okuhle Kubantu Abafuna Imisebenzi Yomhlaba Wonke?
IDubai, ngomunye wabakhiqizi abahamba phambili bakawoyela emhlabeni futhi ungomunye we abahlinzeki bemisebenzi abaholayo esikhathini samanje semisebenzi yesikhumulo sezindiza. Izici eziningi zengeza ndawonye ukwenza isimo sobukhosana se-United Arab Emirates sibe ngesinye sezinqumo eziphezulu ezivela kubantu abafuna umsebenzi emhlabeni wonke. Ngezansi kushiwo ezinye zezinto eziphambili eziye zashintsha iDubai yaba yiphupho lokuya emisebenzini yabangenele ukhetho oluningi.
Ngenye yezinto ezinkulu abantu abaningi abavame ukungazinaki noma bazikhohlwe. Lokhu kungenxa yokuthi sikulungele ukukhokha ngokuzenzakalelayo ingxenye enkulu yemali esiyizuzile kanzima kuhulumeni kangangokuba asikaze sicabange ukuthi mkhulu kangakanani lo umthwalo, ikakhulukazi kwezinye izindawo lapho amanani entela angaba ngaphezulu njenge-40% yenani imali engenayo. Lokho kusho ukuthi ngedola ngalinye esilitholayo, siyacelwa ukuthi sikhokhe amasenti we-40 kwiziphathimandla ezibusayo futhi nje zeneliswe ngamasenti e-60 yize sizinikele futhi sisebenza kanzima. Uma kucatshangelwa esikalini esikhulu, kunengqondo ukuthi sisebenzela mahhala ingxenye ethile yonyaka futhi ubude besikhathi bungasukela enyangeni kuya cishe kwezine kuya endaweni ovela kuyo. Ngakolunye uhlangothi, iDubai, yaziwa kabanzi ngokuxosha okudingayo emithwalweni yentela engenayo, ngaleyo ndlela ebavumela ukuba bajabulele yonke imisebenzi yabo enzima nokuzinikela ngokuphelele.
Amaphakheji angcono kakhulu
Isizathu esikhulu sokuthi abaqokiwe abavela kuwo wonke umhlaba bakulangazelele kakhulu ukujoyina imisebenzi eseDubai ukuthi iphakethe lomholo lilonke elihlinzekwa ngabaqashi. Ngokwesilinganiso esijwayelekile, amaphakheji ajwayele ukuba ngama-20% aphezulu kakhulu kunamanye amazwe angakuhlawula ngawo. Le yinqubomgomo iDubai eyifakileyo ukuyenga ukuthola ithalente elihle kakhulu kuwo wonke ama-globes. Ngakho-ke lokho okuhlanganiswe nomholo ongakhokhiswa intela kungama emalini enkulu engenayo. Isibonelo, umuntu ohola u- $ 100,000 ngonyaka futhi okhokha i-40% intela uthatha ekhaya kuphela u- $ 60,000 ngonyaka. Okomuntu ofana naye, IDubai ikhokha u- $ 120,000 nangamanani entela ayi-zero, okhethiweyo uzigcina zonke. Lokho ngokuyisilinganiso esiphindwe kabili inani lelo abengaligcina ngenjabulo ngemuva kokukhokha izintela. Ngenkathi ngobuchwepheshe bekuyinkokhelo engaphezulu kwe-20% oyisebenzelayo, ekugcineni kosuku, uthokozela iholo eliphindwe kabili ngezizathu ezisebenzayo.
Amaphutha kanye nokubuyisela
Ngolwazi nesikhundla, kuza ozitholayo nokubuyiselwa kwemali. Ngenkathi unjiniyela wezinga lokungena noma umphathi angathola iholo lanyangazonke le-AED 10,000 kuya ku-AED 15,000 kuya ngesibalo sakhe, umqondisi wezobuchwepheshe angakwazi ukufaka i-AED 80,000 kumjikelezo wanyanga zonke. Ngaphezulu kwalokhu, kunezinye izinzuzo eziningi umqashi ezihlinzeka ngazo abavoti ngokuqala ukusuka endaweni yokuhlala yamahhala, ukumboza izikweletu ngocingo, izindawo zokunakekela, ithikithi elilodwa lasekhaya lokuya ngasekhaya ngonyaka kanye nokunye okuningi. Okomuntu osekade ethola i-$ 120,000, ama-perks okuhlala mahhala, ezokuhamba kanye nazo zonke ezinye izinto eziyisisekelo angabeka endaweni ethile cishe nge- $ 10,000 noma ngaphezulu. Noma kudinga ukuxoxisana okunzima kwabafundi bezinga lokungenela amazinga, ngobudala kanye nokuhlangenwe nakho kwabo ngalezi zinto kumane kungenelwa abazokhethwa emigwaqweni yaseDubai. Lokho kusho ukuthi empeleni abanazo izindleko zokubanakekela futhi konke abakwenzayo kungokwabo, ngenzuzo eyengeziwe.
Iholide kanye nekhwalithi yokuphila
Iningi lezinhlangano zivame ukunikela ngempelasonto yosuku lwe-2 ngamahora we-8 wosuku lomsebenzi. Lokhu kumnandi okuncane. Ingxenye ehamba phambili yilabo abazongenela ukhetho bangajabulela ngisho neholide elithatha inyanga yonke ukuvakashela ikhaya labo bese bechitha isikhathi esiningi nomndeni wabo nabangane. Ngengxoxo yamathikithi endiza yamahhala ukuthi iningi labaqokelwa kakhulu ukulithola, ukusebenza eDubai kuyiphupho abaningi abalithandayo. Ukungezelela kilokho, ukwaneliseka komsebenzi otholwa yilabo abazovotelwa yimisebenzi esekwe eDubai akuyona into enobuhlanga. Ukusebenza ezakhiweni ezisezingeni eliphakeme, izakhiwo zokwakha noma izimboni ezihamba phambili ezisezingeni lomhlaba kukhulisa kakhulu ukuzethemba phakathi kwabazongenela ukhetho. Kuqiniswa futhi ngamanani ashibhile ezimoto nezindleko zikaphethiloli ukuthi abantu sekwephuzile bajabulele impilo yabo kuze kube naphezu kohlelo lomsebenzi ojwayelekile.
Lezi eziphambili izinto eziguqula iDubai ibe ngenye yezinketho ezishisa kakhulu zabaqokelwa kwamanye amazwe zokuqinisa injabulo yabo. Kunezindlela eziningi umuntu ofuna umsebenzi angafaka ngazo isicelo semikhakha evulekile emikhakheni efanele. Izingosi ezikwi-Intanethi, izinhlangano zokuqasha kanye nokudalulwa kwemisebenzi kuyindlela elula yokuthi umuntu ofuna umsebenzi afune iphrofayili efanele angayifaka. Futhi bangaxhumana nomqashi ukude ngokusebenzisa iwebhusayithi yabo noma eminye imininingwane yokuxhumana kanye nefayela kwisicelo esiphoqiwe. Izikhangiso zokuqasha kungaba enye indlela yokwazi kabanzi ngamathuba atholakalayo.
Imisebenzi Yomsebenzi KaJobe Ethembisayo Kunazo Zonke E-Dubai
Kusuka eDubai World Trade Center kuya Burj Khalifa futhi konke okuphakathi kukhethekile ngesimo saseDubai. Kungokokuqala ngokobukhulu bese okwesibili ngokuya kwesibalo sabantu phakathi kwabo bonke abazalwane base-Emirates e-UAE. USheikh Maktoum bin Buti al Maktoum, osungulwe emuva e-1833 akuyona kuphela enye yezindawo ezibaluleke kakhulu yendawo kodwa futhi nesikhungo esidumile sebhizinisi. Indawo ekahle yombuso ikwenza kube yisinqumo esifanele sebhizinisi lomhlaba wonke ikakhulukazi emkhakheni kawoyela negesi, ezezimali, ezokuvakasha nezinye eziningi. Itholakala ezifundeni eziseningizimu nasempumalanga yePersian Gulf, njengamanje ingenye yezindawo ezifiseleka kakhulu zomsebenzi phakathi kwabafuna imisebenzi bamazwe omhlaba, ikakhulukazi ngezinzuzo ezinikeza ngemikhakha ehlukahlukene.
Imikhakha yemisebenzi evelele kakhulu kuhulumeni ihlanganisa:
Ngenye yezimboni ezinkulu kakhulu eDubai yize kungeyona ukuphela kohlaka lomnotho wezwe. Ukutholwa kawoyela kokuqala esifundeni kubuya emuva kweminyaka engu-50 futhi kwakuphansi kakhulu. Ukutholwa kamuva kwaguqula isimo sobukhosi saba omunye wabakhiqizi abahamba phambili kawoyela futhi useshintshe indawo waba indawo yokuthola abafuna umsebenzi bamazwe aphesheya kweglobale. Ngomkhiqizo omkhulu kangako ovela embonini yamafutha, kuvulelwa izikhala ezinkulu zabaqokelwe ukujoyina lo mkhakha futhi zikhuphule ukukhula kwabo emsebenzini wabo. Umkhakha ubuya unikeze izinkokhelo ezinkulu kulabo abazifanelekela ngohlu lwamaholo aphansi kakhulu kunjiniyela abasezingeni lokungena nabaphathi abasukela ku-12,000 kuya ku-15,000 AED. Inani eliphakeme kakhulu lingasukela ngase80,000 AED noma ngaphezulu kwabaqondisi bezobuchwepheshe embonini. Iphakethe lomholo lingahluka kakhulu ngokususelwa kuziqu, ulwazi kanye nobuzwe bommeleli.
Ngomunye imboni enkulu ekuqothulweni kwe-UAE futhi kuhlinzeka isizwe ukuhamba kwemali enkulu yakwamanye amazwe. Lo mkhakha ukhule kakhulu kangangokuba isizwe sincike kuwo ukuze uqinise umnotho wawo ezikhathini zamanje. Noma ukuphuma kwemali okuyinhloko kuvela ezitolo ezinkulu zezitolo, izakhiwo zesimanje nezinama-antic nazo ziheha izivakashi eziningi zakwamanye amazwe. Yaziwa nangokuthi inhloko-dolobha yezitolo yalo lonke iqembu laseMiddle East yamazwe, iDubai ihlinzeka ngezitolo ezinkulu ezinkulu, izitolo, izindawo zokuphumula kanye namanye amabhizinisi. Ngokwakhiwa kwalezi zinhlaka ezintsha, izivakashi ezingenakubalwa zingena ukuzophumula iholidi noma uhambo oluncane bese zisebenzisa imali enkulu eholela ekukhuleni komnotho wezwe. Okungezelela ukumangala ukuthi imboni kaphethiloli neoyela inikela nge-6% kuphela ye-GDP ye-emir. Ezokuvakasha zifaka isandla engxenyeni enkulu kwesokunxele. Ngokwalesi sizathu, isikhungo sezingcingo kungenye yezinketho eziphezulu zabantu abafuna umsebenzi ukuthi beze futhi bajoyine umnikelo wemboni ekukhuleni komnotho wezwe. Umkhakha uvulekele bobabili abasanda kuqokwa kanye nalabo abanolwazi ukuze bajoyine futhi bajabulele ukukhulisa umsebenzi.
Njengoba sekushiwo, ukwakhiwa kwesakhiwo sanamuhla sekuqhakaze ngokuphelele esizweni. Ukusuka ezitolo ezinkulu kuya esakhiweni, kusuka ezikhungweni zemfundo kuya kwizikhungo zezamabhizinisi, leli dolobha lisha ngokuphelele futhi kuhlelwe okuningi ukukhuphuka. Lokhu kwenza kube ngenye yezimboni ezihamba phambili zabaqashi be-expat, ikakhulukazi abavela emkhakheni wezokwakha nobunjiniyela bomphakathi ukuba beze bezokhombisa amakhono abo esifundazweni sobukhosi base-United Arab Emirates. Abaqokiwe abaneziqu ezidingekayo kanye nesipiliyoni ingasebenza kalula yazo zonke izikhundla ezitholakalayo ngaphandle kwemigoqo.
Ukunyuka kwezokuvakasha kunikeze ithuba lokuthi kukhuphuke izitolo ezinkulu zokuthenga noma ukukhuphuka kwezindawo zokuthenga sekuvule indlela yokuthuthuka komkhakha wezokuvakasha akucaci. Ukuphela kwento ebonakalayo ukuthi kube nokuqubuka okungazelelwe emkhakheni wezitolo, sibonga abavakashi nabathenga umlutha bezitolo eDubai. Kusungulwe izindawo zokuthenga ezingaphezu kwe-70 eDubai ezikhathini zamuva futhi lokho kufuna ngokuzenzakalelayo expats aphathelene namazwe aphesheya ukufaka isicelo somsebenzi. Noma okuyisidingo esilinganiselwe sokuba umuntu afake isicelo somsebenzi yi-MBA degree, isitifiketi sediploma ezifundweni zokuthengisa ngokusobala singabasiza bavikele umsebenzi omuhle emkhakheni. Ngolwazi olwanele, amaholo, ozimele nezinye izakhiwo zingaba phezulu impela.
Le eminye yemikhakha egqame kakhulu njengamanje edonsela ukhetho oluningi lwamanye amazwe amathuba emisebenzi avulekile anikezwayo. Eminye imikhakha efana nomkhakha wezemfundo kanye nemikhakha ye-IT nayo inegalelo elikhulu ekunikezelweni kwamathuba emisebenzi kwabaqokiwe abafanele. Ngaphandle kwalokhu, izinsizakalo zezezimali nokuhlobene nazo ziheha ezinhlelweni ezinkulu ezivela kuma-expats aphesheya.
Amathiphu Okuvikela Ukunikezwa Kwemisebenzi Enhle E-Dubai
IDubai iyaqhubeka nokuba ngesinye sezindawo ezihehayo zabafuna imisebenzi exat ikakhulukazi izinzuzo ezingenakuthengiswa abazinikeza abazongenela ukhetho. Ngokuhola okungakhokhiswa intela, amanani akhuphukayo okukhokhelwa, amapaki amaningi nezinye izikhungo, amathuba emisebenzi emikhakheni eminingi yaseDubai abelokhu enyuka njalo. Ngaphezu kwalokho, ngokuba ngomunye wabahola indawo yabavakashi kanye nesimo esithuthukayo, imikhakha ehlukahlukene ivulele abaningi amathuba omhlaba jikelele. Imikhakha emikhulu ekhulayo esifundeni ifaka okufana nokwakha, ukuhweba ngomhlaba, ukumaketha nokuthengisa izinsiza zezimali phakathi kweminye imikhakha eminingi. Ngakho-ke i-Dubai inikeza ithuba yazo zonke izikhathi ezikhulayo ukwengeza ekukhuliseni okukhulu kugrafu yomsebenzi wabo futhi ungeze kokunye okuhlangenwe nakho kokusebenza kwamazwe omhlaba ekuqhubekeni kabusha. Ngezansi kushiwo ezinye izeluleko zokuqalisa ngenqubo yesicelo somsebenzi yemisebenzi esekwe eDubai.
Ukukhetha kumaphrofayli afanele
Akukhathalekile ukuthi umenzi wesicelo ungumuntu ongenela ukhetho lokungenela noma onolwazi inqobo nje lapho befaka isicelo sephrofayili efanele. Phakathi kwemikhakha eminingi ethuthukayo eDubai, kubalulekile ukuthi abafuna umsebenzi bazi ukuthi yini efanelekile kubo. Yonke imboni inemikhakha eminingi nayo yonke imikhakha ithola uhlelo lokusebenza ezimbonini eziningi. Ngakho-ke kubaluleke kakhulu kumuntu ofuna umsebenzi ukuba athathe isinqumo ngokuqiniseka. Kungadida impela okhethwayo ukuthi akhethe. Ngenkathi abaningi bafuna ukusebenza embonini ethile ngoba bafuna, abanye bafuna ukujoyina umkhakha othize ngoba beqeqeshelwe wona. Kunoma ikuphi, iziqu zibaluleke kakhulu emisebenzini efanele eDubai ngemisebenzi esekwe nekhono ingaphumuza kancane kulo mongo.
Ukuthintana nezinketho zokuqasha
Kunezinketho eziningi ezitholakalayo nganoma yimuphi ofuna umsebenzi ofuna ukufaka isicelo somsebenzi eDubai. Bangajoyina umsebenzi Expo lokho kwenziwa minyaka yonke emazweni amakhulu lapho abaqashi benza ukuqasha ngobuningi okubandakanya i-India nakwamanye amazwe amaningi. Bangazenza nokuthi babhaliswe ngisho nasezinsizeni ezi-inthanethi ezahlukahlukene ezinikezelwe abafuna umsebenzi noma babheke kuma-classifieds ukuze bathole ithuba elifanele elifanele. Enye indlela kungaba ukuvakashela izinhlaka ezahlukahlukene zokuqasha ezingakhokhisa imali ethile ngezinsizakalo zabo minyaka yonke. Izinhlangano eziningi ezinjalo ezingelona iqiniso ziye zeza ezikhathini zamanje okwenza kube nzima ukuthi abafuna umsebenzi bazi ukuthi kufanele bathembe bani futhi ngasiphi isizathu. Abavunyelwe bangahlola ngisho nasemawebhusayithi asemthethweni enhlangano futhi bafake izicelo zezikhala ezifanele ngokuhambisana nencwadi eyemboza bese beqhubeka nokuhlinzeka ngemininingwane yabo. Inethiwekhi yomuntu siqu efana nabangane abathile, amalungu omndeni noma abanye obaziyo ukusebenza eDubai noma ku-Abu Dhabi kungaba enye indlela ongayicabanga. Abafuna umsebenzi bangaya ngisho nasemzimbeni e-Dubai ukuze bazifunele iphrofayli elifanele elihambisana neziqinisekiso zabo.
Ukuza nencwadi enkulu yekhava
Ngenye yezingxenye ezibaluleke kakhulu zenqubo yokufaka isicelo somsebenzi. Ukuza nencwadi yokubhala ephoqa lowo oqoqayo ukuba abe nentshisekelo ngovotayo kungumsebenzi onzima impela. Kuvele ama-ejensi anikezela ngezinsizakalo ezinjalo ezwa imali ekhokhiswayo. Ukugxila okuyinhloko kwencwadi esembozweni kufanele kube ezintweni ezimbili eziyisisekelo. Kuqala, ukugxila kufanele kube ekusholeni ukuthi yini eyenza umuntu afanele lowo msebenzi. Ngaphandle kwalokhu, kuyadingeka futhi ukusho ukuthi kungani umqashi kufanele akhethe ofuna umsebenzi phakathi kwabo bonke abanye abazongenela ukhetho. Lokho kufaka nokusho ukuthi yiziphi ezinye izinzuzo ezengeziwe umqashi angabheka phambili kuzo ukujabulela ngenkathi eqasha umuntu ozongenela ukhetho. Kuyadingeka ukukhuluma nomfundi encwadini esembozweni ngangokunokwenzeka, ngendlela yengqondo yokuzibopha.
Ukuza nokuvuselelwa okukhulu
Kuzo zonke izicelo zomsebenzi, yi-resume ekhuluma kulabo abazobhapathizwa. Yisinyathelo sokuqala lapho uMenenja Wezinsiza Zabantu ekwazi khona umqashi womsebenzi. Ukuqhubeka kufanele kube nakho konke okuphathelene nomqashi womsebenzi kubandakanya iziqu zemfundo, okuhlangenwe nakho komsebenzi wangaphambilini, izifundo zokuqinisekisa, amaphrojekthi okwenziwa kanye neminye imininingwane eyisisekelo. Ngenkathi ifomethi yokwenza kabusha ingahlukahluka ngamazwe, ukuza nokuqala kabusha kwekhasi elilodwa kungaba yinto engalungile e-Dubai. Nakuba ubukhulu buzoxhomeka ekufundeni kanye nobuchwepheshe bomuntu ozobhapathizwa, okwakhiwa okungenani ngamakhasi ambalwa kungase kube nezithelo uma kungenakwenzeka ukuba nezingane ezintathu. Kubalulekile ukuba abafuna umsebenzi bathi onke amaqiniso njengokuziqhenya noma ukugqweba izinto angakwazi ukungafaneleki ngokushesha ukhetho lokufuna umsebenzi.
Uma ofuna umsebenzi uzoya eDubai ayozingela ngokomzimba athole umsebenzi, izinto zingahluka futhi zibe yinkimbinkimbi ngokwengeziwe njengoba zizobe zingenakho ukuziqondisa. Kepha ngenkathi sisebenzisa izingosi eziku-inthanethi, amawebhusayithi, okuvezwa noma ama-ejensi, ukhetho lungabheka phambili ekujabuleni ukuholwa okuthile okugeleza inqubo yokufaka isicelo.
Amathiphu Okuxoxa Ngomsebenzi E-UAE
Ingxoxo yingxenye ebaluleke kakhulu yesicelo sakho somsebenzi. Ngemuva kokusebenzisa i-CV enhle kakhulu, incwadi eyikhava, bese uyethula ngokomnqamulajuqu, kufanele uvele ngaphambi kwephaneli. Abaxoxisana nabasebenzi kumele bahlaziye amakhono akho bese bethola lokho okushilo ku-CV. Kubaqashi abaningi, iziqu zobungcweti ziyisisekelo senqubo yokwenza isicelo. Umnyakazo we -hoji ukubandakanya isisebenzi esingahle sikhona ukuhlola ukuthi ngabe ubuntu futhi amandla afanelekile ngesiko lenkampani kanye nesakhiwo.
Kufanele uzibonakalise ngaphambi kwephaneli yengxoxo. Ukuthi uzithwala kanjani esigabeni ngasinye sosuku lwe-interview, kusukela lapho ungena esangweni kunquma isiphetho sakho. I-UAE iphakathi kwamazwe aphezulu emhlabeni wonke ahlanganisa ubuchwepheshe ngokushesha. Awusoze wazi uhlobo lwe-interview ozobekwa kulo; abanye abaqashi bangafuna ukudonsa isimanga.
Abaqashi bayazi ukuthi uyeza ukulungiswa ngendlela yokuziphatha nokukhuluma kodwa bafuna ukuthola ubuntu bakho bangempela. Umqashi udinga ukwazi ukuthi usabela kanjani ezindaweni ezahlukene. I-CCTV iyiqhinga eliyisisekelo labathengi, awukwazi ukuthi uzobekwa kuphi noma ukuthi uzobekwa kanjani. Yingakho kufanele uqale ngokugqoka okufanelekile nokusebenzisana kahle nabo bonke abasuka esangweni. Ngenkathi kufanele ucwaninge, kungenzeka ungalokothi wazi umphathi noma umuntu ozohlangana naye kuleso sigaba.
Noma kunjalo, akufanele wesabe ukuxoxisana nabantu. Nawa amanye amathiphu wokugcina uzolile futhi uqiniseke.
Ucwaningo mayelana nesimo sakho
Kufanele uchaze isikhundla somsebenzi. Thola ukuthi yini umsebenzi odinga hhayi kuphela amakhono ajwayelekile embonini kodwa lokho umqashi akulindele kumuntu ukugcwalisa isikhundla. Ngaphandle kwencazelo yomsebenzi, abaqashi bafuna ubuntu obufanela leso sikhundla. Amakhono wobuchwepheshe ayiphuzu nje kulokho abaqashi abakufunayo emsebenzini, kungaba mayelana nekhodi yokugqoka noma indlela okhuluma ngayo. Yize kungafanele wenze sengathi ukhululekile futhi ube ngumqashi ngokungahle ube ngumqashi wakho, kufanele uhambisane nezindinganiso ezilindelekile.
Uma kungenzeka, thola ngesisebenzi esedlule endaweni efanayo. Uma unesipiliyoni ensimini, unethuba elingcono ngokuthola umsebenzi. Bheka futhi uthole ukuthi kungani isisebenzi esedlule sishiya futhi izinga lokusebenza lifunwa ngumqashi.
Faka lokhu ngencazelo yakho. Qinisekisa ukuthi uyazi konke okulindelekile.
Khuluma ngokuhlangenwe nakho kwakho
Esikhundleni sokuhlala phezu kwamakhono obuchwepheshe nokuthi ufunde kuphi, khuluma ngesipiliyoni somsebenzi. Yabelana nomuntu oxoxa naye we impumelelo kanye nezinselelo emsebenzini. Kuyithuba lokuthi uziveze ukuthi uwulungele lowo msebenzi ngoba uyazi ukuthi uhlanganisani. Imvamisa, abaqashi e-UAE bathanda ukhetho olunesipiliyoni esisebenzayo endle. Uma unethemba lokufaka isicelo somsebenzi ezinyangeni ezimbalwa e-UAE, amakhono ongezelelwa, futhi uthole indawo ongayengeza kulwazi lwakho, kubalulekile ukuthola umsebenzi esizweni sama-Arabhu.
Iningi labo abafuna umsebenzi baphutha amakhono ochwepheshe emisebenzi; ukusebenza endaweni yokusebenza kudinga ukusetshenziswa kwezindinganiso ezimweni zangempela. Ngesikhathi sokuxoxisana, lokhu kungumqashi ofuna ukuzwa. I-CV yakho isinikeze ithuba lokuxoxisana; Ngakho-ke, thatha njengethuba lokuchaza kabanzi mayelana nobuchwepheshe bakho ngokusebenzisa isipiliyoni. Inkhulumiswano iphathelene nokukholisa umqashi owaziyo ukuthi lo msebenzi uhilela kuphi futhi kuze kube semsebenzini.
Ngaphandle kokuchazwa komsebenzi jikelele ngokusekelwe ezimfuno zekhono, kufanele wazi kahle ukulindela kwenkampani. Indima yakho ethize uma ujoyina ithimba.
Ngesikhathi i-interview ingxoxo engamakhambi amabili, ungakhulumi kakhulu. Vumela oxoxisana naye ukuthi abe nokulawula kweseshini ngoba yilowo nalowo ophethe. Ngenkathi kufanele uhlaziye ekuphenduleni kwakho futhi ugweme ukungafani, ukukhuluma okuningi kungabangela ukuphazamisa iphaneli. Futhi, ingachazwa njengobuntu obunamandla, okungase kube bubi emsebenzini wakho. Ukukhuluma okuningi njengomuntu oxoxwa naye kungabuye kuchazwe njengompofu ekuthatheni imiyalo ngoba ukhuluma ngaphezu kokulalela. Iphaneli le-interview lingase likubhale kalula ukukubona ukuthi liwumsebenzi omkhulu kakhulu.
Ngaphandle kwalokho, ungaba lula uma ukhuluma okuningi. Ulimi lwakho lungasakaza futhi lubonise isimo esingathandeki. Nakuba kufanele uphumule futhi uxoxisane naye ngokuzethemba, ungahlali ukhululekile. Kuyisilinganiso.
Yiba nomqondo ovulekile
Kufanele ube nethemba ngazo zonke izindlela lapho uya kwinhlolokhono. Vele, awuchithi isikhathi sokucwaninga nokugqoka ngenkathi ulindele ukuphuthelwa umsebenzi. Noma kunjalo, kufanele uzimisele ukwamukela noma yiluphi uhlobo lokuphendula. Akukho okusobala e-UAE imakethe yomsebenzi. Ukulahlekelwa ngumsebenzi akusho ukuthi awenele nganoma iyiphi indlela. Kungaba isikhundla esisodwa futhi ungabafundi abaningi yingakho kufanele kushiywe. Ukuba nomqondo ovulekile kukusiza ukuba uhlale uphelelwe yithemba, okuyinto engasebenzi kubaqashi e-UAE.
Izinto ze-7 Umfaki we-Job ku-UAE Kufanele Akwazi
I-UAE inamathuba emisebenzi aholayo. Kodwa-ke, ukuthola umsebenzi esizweni sama-Arabhu akusobala. Kufanele uqonde isiko, izidingo ezithile zomqashi ngamunye, bese wethula incwadi yakho yesembozo ngendlela engcono kakhulu.
Ngaphandle kokubuka kwakho kongcweti, kubalulekile ukuqonda imvelo nokulindelekile hhayi umqashi kuphela kepha imboni namasiko. Futhi, kuzofanela ujwayele imvelo esemthethweni ukugwema noma yikuphi okwenzekayo ngenkathi usesha umsebenzi.
Nazi ezinye izinto ezibalulekile okufanele wazi:
Njengomuntu ofuna umsebenzi, kungenzeka lokhu kude nezwe lakho. Njengamanje, konke okudingayo kungumsebenzi futhi ukhokha kahle. Kodwa-ke, maduze uzofika eqinisweni lokuthi udinga ukuphumula noma okungenani ikhefu. Ikakhulu, lapho uyi-expat, iholidi libalulekile. Izinkampani eziningi e-UAE zivumela izinsuku zekhalenda le-30 njengekhefu lonyaka labangaphandle. Uzokhokhelwa wonke amaholide omphakathi, okungeyona ingxenye yezinsuku ze-30. Ikhefu lokugula alibalwa phakathi kwezinsuku zokusebenza ze-22 zeholide elikhokhelwayo.
Kubalulekile ukuba uxoxisane nalezi zinsuku zezinsuku zokuvakasha ukuze uhlele ukuhambela kwakho, kungakhathaliseki ukuthi ibanga elingakanani ezweni lakini. Ukuzijwayeza ngalokhu kuzokusiza ukuba ugweme ukukhulisa isihloko ngendlela engafanele kumqashi wakho.
I-UAE yisizwe sama-Arabhu ngakho-ke ukusetshenziswa okubanzi kwesi-Arabhu njengolimi olusemthethweni emhlabeni wobumbano. Uzohlangana nolimi kusuka kwinkontileka yokuqashwa ukuze uqashe isivumelwano sendawo yokuhlala yakho. Uzoba ntofontofo ngokwengeziwe uma unombono wolimi; Ngakho-ke, kuwukuhlakanipha ukujwayelana nolimi ngokwengxenye noma ngokuphelele ngaphambi kokuthuthela e-UAE. Izokwenza impilo yakho ibe lula.
Noma kunjalo, I-UAE yizwe elinendawo yonke enabasebenzi abaphethwe ngabokufika. IsiNgisi, isi-Urdu, isiHindi, nesiFarsi zivamile kwezinye izilimi zakwamanye amazwe. Futhi, amafemu amaningi embonini yokungenisa izihambi kufaka nezindiza zezindiza nezitolo ezinkulu zifuna abasebenzi bazi izilimi eziningana.
Njengomuntu othengisa indawo ethe xaxa, iPasipoti iyimfuneko eyisisekelo. Ngaphandle kwalokho, udinga i-Visa ye-UAE, kungaba njengezivakashi noma ovakashele kuphela. Lokhu kuzokutholela ukungena ku-UAE. Uyacelwa ukuthi ube nemvume yokusebenza okungenani izinyanga ze-3 ngaphambi kokufaka kwakho. Imvume yokusebenza unomphela noma i-visa izokhishwa ngokuhamba kwesikhathi uma uvikela umsebenzi. Isikhathi eside semvume sincike kwinkontileka yakho.
Ngemuva kokuthola umsebenzi wesikhathi esigcwele futhi uhlala njengomuntu ohlala e-UAE, oshade naye uthola ukufinyelela okuzenzakalelayo emsebenzini wokusebenza isikhathi esithile kanye nemvume yokusebenza e-UAE.
Ukuba yisizwe sama-Arabhu, I-Islam yinkolo ebusayo emadolobheni amaningi. Yinkolo esemthethweni. Udinga ukuthi ufunde izisekelo zenkolo yazo ukuze ugweme ukukhubekisa umqashi ongaba khona. Okungenani ungaqali ukubambana ngezandla nabesifazane, akufanele. Noma kunjalo, abaqashi emadolobheni amakhulu njenge-Abu Dhabi naseDubai bahlala futhi bahloniphe ezinye izinkolo.
Esinye sezizathu zokuthi u-UAE uthandwa ngabantu abaqeqeshiwe futhi ukhanga abasebenzi abaningi nsuku zonke kungenxa yesistimu yentela yamahhala. Ayikho intela. Izindleko eziphakeme zokuhlala emadolobheni amakhulu afana neDaibhu kubhekwa ngamaphesenti engeziwe emalini yesevisi. Kuyinto evamile kumafemu embonini yokungenisa izihambi ukwengeza isilinganiso se-10% ekukhokhweni kwezikweletu. Ukuphawula akuvamile ku-UAE ngenxa yale phesenti eyengeziwe emithethweni. Noma kunjalo, kufanele uhlole izikweletu zakho ngaso sonke isikhathi kanye nesiphakamiso lapho kunesidingo, ikakhulukazi lapho inkokhelo yesevisi ingekho.
I-UAE isebenza ngezinqubomgomo. Uma uhlangothi olungalungile lomthetho, yiba yinkampani noma imvelo, qiniseka ukuthi ukhokhela izinhlawulo ezinkulu zokungahambisani nomthetho. Ukuphatha kwendawo kunzima; akukho ukwephulwa komthetho kungakhathaliseki isikhundla sakho somsebenzi. Njengomqashi womsebenzi, ungase ufune ukugwema noma yiziphi izindleko ezingadingekile noma amarekhodi amabi angase akhohlise i-CV yakho. Abaqashi bazimisele kakhulu ekuziphatheni nasekuziphatheni. Ungalahleki noma ukhafule noma kuphi, imithetho ye-UAE inzima!
Iqiniso lokuthi I-UAE iphethwe ngezinqubomgomo nemithetho eqinile, ingelinye lamazwe aphephe kakhulu ukuhlala njengothunyelwayo. Futhi, i-Islam njengenkolo esemthethweni ifuna isimilo kanye nomphakathi abushelelezi. I-UAE inezinga lobugebengu eliphansi ngenxa yesiko, inkolo, kanye nemikhosi enamandla yokuqinisa umthetho. Izwe selitshalile kwezokuphepha imishini nobuchwepheshe ukuqinisa ezokuphepha kuzo zonke izingxenye zedolobha. Eqinisweni, indawo ephephile iyimbangela ehamba phambili yokwanda kwabasebenzi ezweni.
Gwema ukugqoka izingubo ezibonakalayo emphakathini; iphikisana namasiko nenkolo. Kubhekwa njengokucasula. Futhi ukubhukuda wedwa emabhishi omphakathi kungase kukuveze engozini.
Joyina abasebenzi be-UAE ngemuva kokujwayela lezi zinto!
Indlela Yokudlulisa I-Job Job Interview ku-UAE
I-UAE igcwele amathuba emisebenzi emikhakheni ehlukene yobuchwepheshe. Kodwa-ke, akuwona wonke umuntu ongasebenza kwisizwe sama-Arabhu, kuphela abambalwa abawazi ukushayela ngezingxoxo zomsebenzi. Ukuncintisana okwandayo kwemisebenzi e-UAE kwenza inqubo yokuxoxisana iqakatheke kakhulu ekufikeni umsebenzi. Yisigaba esibalulekile sokusesha umsebenzi; kufanele ucwaninge ngezidingo nezidingo zabaqashi futhi uziphathe ngendlela ehambelana nensimu yakho. Ngenkathi ukuncintisana kwenza kube nzima ukuthola umsebenzi, kubuye kube nethuba kubantu abanolwazi lokuqinisekisa umqashi kalula.
Indlela obhala ngayo bese ubonisa ukuqala kwakho kuyisici esibalulekile. Kodwa lokho kungenxa yokufakwa kuhlu olufushane, isigaba esibaluleke kunazo zonke ingxoxo. Yilapho kufanele unikeze okusemandleni akho ukuqinisekisa umqashi. Kuyithuba lakho lokufakazela ukufaneleka kwalokho okushilo ku-CV.
Ukudlulisa i-interview kuhilela okungaphezu kokucwaninga imibuzo engaba khona yocwaningo. Ngokusobala, kufanele ufunde ngomlando kanye nesakhiwo senkampani oyisebenzisayo. Kubonisa isithakazelo nokuzibophezela kubhizinisi lenkampani. Abaningi abafuna umsebenzi balahlekelwa isici esibalulekile sokuxoxisana, ukuxhumana; ngokuvamile kuphutha ngenxa yokuphendula imibuzo kuphela.
I-interview kufanele ibe yinto emibili; kufanele kube ukukhulumisana phakathi komcwaningi kanye nomqashi womsebenzi. Empeleni, kufanele ubuze imibuzo ukukusiza wenze isinqumo esifanele. Ngesikhathi wonke umuntu eqala ukukhathazeka ngaphambi, ngesikhathi, nangemva kokuxoxisana, ukulungiselela ngokwanele kuzokusiza uhlale unethemba futhi uthole umsebenzi
Nazi amathiphu ambalwa okuzokusiza ngenqubo:
Gqoka ngendlela efanele
Ukugqoka kunakho konke okwenziwe ngokuqala kokuqala, okuthonya umbono we-interviewer. Ngokujwayelekile, abantu baqondiswa ukuba bagqoke ngendlela efanele. Abesifazane bagqoka izigqoko ezinemibala enesizotha ngenkathi amadoda egqoka izikhwama zebhizinisi. Lokhu kubalulekile kodwa kuyisizathu sokumangalisa oxoxisana naye. Kufanele uhambe ngaphezu kokugqoka okusemthethweni; yiba nokuhlakanipha futhi uthole ikhodi yokugqoka yenkampani. Abaqashi bahluke ekuthandweni kwezembatho.
Amasiko abalulekile kubantu base-UAE. Ukugqoka kuyisici esibalulekile semasiko; lokhu kufanele kube yindawo yakho yokuqala ekwenzeni umbono wokuqala. Thola ithoni yenhlangano futhi ugqoke ngendlela efanele. Umqashi angathola isithakazelo kuwe ngoba nje ugqoka njengoba kulindeleke.
Zibuze ngaphambi kokuxoxisana
Iningi labantu liyakhathazeka ngokuthi hlobo luni lwemibuzo engase ivele kule ngxoxo. Kuyinto yokukhathazeka okuvamile; ukuthola impendulo enembile njengalindelwe ngabathengi. Umbuzo ovamile kubantu abaxoxisana nabo yilokho okukushukumisela ngensimu ethize. Amathuba emisebenzi ahlukile kumfuneko yekhono. Kudingeka uqiniseke njalo kumqashi wakho ngoba abaqashi abaphezulu bahlolisisa ukuthi uhlolwe. Yilungele.
Futhi, hlaziya amandla akho, ubuthakathaka, amathuba, kanye nezinsongo ezisuselwa kumazinga embonini. Uyothola isikhathi esilula ukuphendula imibuzo yocwaningo njengoba kudingwa yi-interviewer ngakho amathuba amaningi okuthola umsebenzi. Kufanele wazi uhlobo lomqashi olufana namakhono akho. Ukuzethula kumqashi ofanele ukwandisa amathuba okuthola umsebenzi ku-UAE.
Okokuqala, kufanele uhlale ukhumbule ukuthi uhlala ezweni lase-Arabhu futhi uthole okuyisisekelo ngalokho abakubheka okulungile nokungalungile. Khumbula ukuxoxwa mayelana nokwenza umqondo. Eqinisweni, kumele uqiniseke umqashi ngezimfanelo zakho kanye nencwadi yokubhala ngaphambi kokukukhetha ohlwini lokuxoxisana. Noma kunjalo, kudingeka baqiniseke ngobuntu nokuziphatha komuntu ngaphambi kokuqashwa. Yingakho izingxoxo ziyisigaba sokugcina nesibalulekile senqubo yokuqasha.
Ngaphandle kokugqoka ngendlela efanele, ukukhetha kahle amagama, nokugcina ubuso obumnandi, kufanele uhambe ngokujulile ngesiko sama-Arabhu. Ngenkathi ukuxhunyana ngesandla kuyisenzo somusa, akulungile ukunikeza ukuxhashazwa ngokobulili obuhlukile. Ngeke ube ngcono ekulindeni ukuba baqale isandla. Futhi, isiko sama-Arabhu sibukeka singenangqondo uma wenqaba isiphuzo sokuphuza. Uma unikezwa ikhofi, itiye, noma ingilazi yamanzi, qiniseka ukuyikhetha.
Amathiphu ejwayelekile wokuziphatha ahlanganisa ukulinda umuntu obuza imibuzo ukuba anikeze isihlalo, alondoloze ukuxhumana kwamehlo nawo wonke iphaneli, futhi alondoloze ithoni elinganisiwe lapho ephendula imibuzo. Ungagumbuki esihlalweni sakho ngesikhathi sokuxoxisana, hlala ngqo. Gwema ukuhamba komzimba ngokweqile njengamilenze nezandla ngesikhatsi uxoxwa. Njengakwezinye izingxenye zomhlaba, ungasebenzisi ifoni ephathekayo ngenkathi uxoxwa ku-UAE, kubhekwa njengento engenandaba.
Funda ukuxoxisana kwamaholo
Ngokusobala, awenawo kuphela emgqeni wokuqasha. Mhlawumbe, isici kuphela esikuhlukanisa nakwezinye ukhetho kungumholo. Ngenkathi kufanele ucabangele okuhlangenwe nakho kwakho nezidingo ekuchazeni umholo, kufanele ube ohlakaniphile ukuba ungasho ngaphezulu kwezinga lemakethe.
Ukudlulisa ingxoxo kusekelwe ocwaningweni olufanele.
Ukusebenza njengomfundisi e-UAE
Ukusebenza e-UAE kuyinto ejabulisayo uma ufuna ukusebenza kude nekhaya. Kunamathuba amaningi emisebenzi kanye nokunikezwa kwamanye amazwe e-UAE uma uzimisele futhi unamaphepha ukuze ufaneleke. Abaningi baseBrithani, amaMelika, amaCanada kanye namaShayina phakathi kwabanye, baphumelele ekuthatheni imisebenzi ngaphandle kwemingcele noma ukuhlukunyezwa. Ngenxa yemigomo nemithethonqubo, kukhona amaholo ahloniphekile atholakalayo.
Imisebenzi yokufundisa iphakathi kwemisebenzi ejwayelekile kakhulu yezizwe ezivela emazweni ase-UAE. Isizathu sihulumeni ku-Emirates uqondise imizamo yawo ekukhuthazeni uhlelo lwezemfundo lwe-Emirati. Ukwakhiwa komphakathi onolwazi ezweni lama-Arabhu kuyindlela engcono kakhulu yokuhlomisa izizukulwane ezizayo ngalokho okudingekayo ukuze kube nomnotho osimeme. Amagugu amancane ahlonipha isizwe afuna ukusungula izindinganiso zabantu nokuzibophezela ekufundeni nasekusebenzeni. Ukuze wenze lokhu, ukuthola abasebenzi abanokwethenjelwa kudlala ingxenye ebalulekile yenqubo yokufinyelela umgomo
Izikole zikahulumeni yindawo yokubeka amasu ekusebenzeni. Ngokuqondene nalokhu, umsebenzi uphezulu ngokufunwa. Uhulumeni ulungele ukutshala izimali kakhulu kwabasebenzi bangaphandle ukuze kuthuthukiswe uhlelo lwayo lwemfundo. Isikole somphakathi sithole imali enkulu futhi sanikeza ingxenye enkulu yebhajethi kazwelonke ukunikeza abantwana base-Emirati ithuba lokuthola isikole esingcono kakhulu.
Loluhlelo lwakhiwe ukwakha uhlelo olusha lokulungiselela izingane emphakathini we-ultra-wanamuhla. Ukwenza lokhu, uMnyango WezeMfundo uye wakhulisa ukugxila kwenkqubo yoNgqongqoshe we-English Medium. Ngakho-ke isiNgisi sifundiswa kuwo wonke amazinga ohlelweni. Kuphakathi kwezihloko eziyinhloko ngokuhambisana nezibalo neSayensi. Abanye ohlwini luyizifundo ezisebenzayo ezifana neBhizinisi ne-Entrepreneurship, Imfundo Yezemvelo, Amakhono Okuphila, I-Computer Science, ne-Design Technology. Zinikezwa phakathi kwamaBanga 10-12 futhi sezivele zenze umthelela omkhulu kubantu.
Ngokungafani nekhaya, ukufundisa e-UAE kuyithuba elihle lokubheka phambili namuhla. Kuningi okumele ufunde futhi uzuze ngokusebenza e-UAE okufanele ungaphuthelwa uma uhlose ukuhlala lapha njengomuntu wakuleli.
Izidingo zabafundisi ziyahlukahluka ngokusho kwesimo esibucayi. Zibuye zijwayele ukulungiswa ngakho-ke umehluko ovamile. Noma kunjalo, izidingo jikelele ezisebenza njengemihlahlandlela yilezi;
Isiqu se-Bachelor in Education Early Childhood noma isitifiketi esilandelayo esivela esikhungweni esaziwayo
Ukutholakala kwelayisensi yokufundisa
Iminyaka eyi-2 yokuhlangenwe nakho okufundisiwe kwangaphambili ku-Kindergarten noma Iminyaka Yokuqala Yonyaka ngaphambi kokufaka isicelo
Ukuze uthole umsebenzi wokufundisa ngesiNgisi, udinga iziqu ezilandelayo
Isiqinisekiso se-CELTA noma i-Teaching Credential / License
Iminyaka engu-2 yokuhlangenwe nakho okufundisiwe kwangaphambilini
Ukulungiswa kwemisebenzi e-UAE kudinga imibhalo eyanele ngokuhambisana nomthetho wezwe. Ukuqinisekisa amadokhumenti akho yisinyathelo sokuqala esibalulekile kule nqubo. I-visa yomsebenzi iyithekithi yakho yokuthola amalungelo namalungelo noma isimo somsebenzi. Lokhu kuyimfuneko ebalulekile kubantu bezinye izizwe abazimisele ukuthola umsebenzi lapha. Ungangena kwi-Emirates kumvakashi noma i-visa yezokuvakasha kodwa kuzodingeka uthumele isimo sakho se-visa uma usutholile umsebenzi. Abaningi bezinye izizwe e-Dubai akudingeki ukuba bathole i-visa ngaphambi kokufika kwabo. Kufanele futhi uqaphele ukuthi izwe lakho lomvelaphi lidlala indima ekunqumweni kwama-waivers. Isibonelo, ezinye izakhamizi ezinemvume yokugcina i-visa yazo ku-UAE ngezinsuku ze-90 zifaka amaMelika, amaBritish, amaCanada, namaShayina.
Ukusebenza ngaphandle kwe-visa yokusebenza efanele akukwaziswa ngoba kuyingozi. Uma ubanjwe, uzobe usenkingeni yokungabi nalutho. Uma kungenjalo, kuyodingeka ukuthi ushiye izwe ekupheleni kwe-visa yakho. Ngenhlanhla, lapho uthola umsebenzi, umqashi wakho uzoqala inqubo ye-visa kuwe ukuze kungadingeki ukhathazeke ngakho. Inkampani izobamba inqubo. Konke okudingeka ukwenze ukuhambisa imibhalo yakho esemthethweni njengenombolo yakho yepasipoti ukuqala inqubo. Kodwa-ke, akusikho konke okudingekayo ukufaneleka ukuthola i-visa yomsebenzi.
Ukuzibophezela kuka-Emirati kukahulumeni ekukhuliseni inhlalakahle yabantu bayo kuye kwabangela isingeniso ekufundiseni imisebenzi. Lena ithuba elihle kubantu bezinye izizwe abafuna imisebenzi ngenxa yokuncintisana nokuncintisana ekhaya. Uma ufuna ukwenza okungcono kakhulu empilweni yakho njengomuntu ohlala e-UAE, nawe unethuba elihle lokwenza imali kulokhu. Kungakhathaliseki isizathu sakho sokuthuthela e-UAE, ungazuza kumabhonasi afika nawo. Isibonelo, ungakwazi ukuhambisa umndeni wakho ngaphezulu ngamaholidi ukuze ujabulele izinto ezingenakulinganiswa zobuhle besizwe sama-Arabhiya esanda ngokushesha.
Izici ezibalulekile ze-6 Ukuqaphela Lapho Usebenza E-UAE
Umcabango wokusebenza kude nezwe lakho langaphandle ungesabeka. Kodwa-ke, i-UAE inikeza okuhlangenwe nakho okuthakazelisayo kunayo yonke yezidingo. Kungakhathaliseki ukuthi insimu yakho yezobuchwepheshe, kunamathuba amaningi esizweni sama-Arabhu. Lokhu akusho ukuthi uzothola umsebenzi ngokuzenzakalelayo; kufanele ucwaninge ngabaqashi abafanelekile futhi uphenye ekuhloliseni umsebenzi ukuze uvikele umsebenzi okhokhela kahle e-UAE. Kodwa-ke, ukuhlala ezweni njengezisebenzi zesikhathi esigcwele kuthatha okungaphezu kwesilinganiso somholo nokuphepha komsebenzi.
Kumele ujwayelane nezinqubomgomo zenkampani futhi okubaluleke kakhulu amalungelo akho. Ezinye izakhi ezibalulekile kufanele uhlole amahora ethu okusebenza, amaholide, kanye nezinga elijwayelekile lokukhokha. Kungakhathaliseki ukuthi usuvele ukhona ezweni noma uhlela ukuthuthela emisebenzini yokufuna umsebenzi, kubalulekile ukuqaphela lezi zici ezilandelayo.
Umthetho we-UAE udinga ukuthi abaqashi bakhokhele zonke izindleko eziphathelene nokuhamba nokuqashelwa. Isimemo sokuxoxa, akufanele ukhathazeke ngezindleko zamathikithi esindiza futhi uhlele i-visa yokungena ku-UAE. Kungumthwalo womqashi. Noma yiziphi izinkokhelo ezifanele nge-ejensi yokuqashwa kufanele zikhokhwe ngumqashi wakho ongase akwazi ukukukhokhela. Iningi lezindleko aziqapheli le nqubomgomo ngakho-ke inzuzo yabaqashi. Qinisekisa ukuthi i-ejensi yokuqasha embukisweni ivunyiwe nguhulumeni wezwe lakho langakini ukuze ugweme noma yikuphi ukugubha noma ukuwa kwezilwane kubantu abanonya.
Kufanele ufunde ngazo zonke imigomo nemibandela esivumelwaneni somsebenzi. Thatha isikhathi sokufunda yonke into enkonzweni futhi uqinisekise ukuthi ihambisana nomnikelo wokunikezwa umsebenzi. Hlanganisa i-ejenti yakho yomqashi noma yokuqasha kunoma yini engacacile noma engajwayelekile. Lokhu kufanele kwenziwe ngaphambi kokwenza izinhlelo zokuya ku-UAE, qondisisa konke.
Hlola isihloko somsebenzi, umholo, kanye nemithwalo yemfanelo ecacile njengengcazelo yomsebenzi. Kufanele ukhululeke ngemithwalo yemfanelo ngamunye futhi kufanele ihambisane namakhono akho. Ukhululekile ukubuza uma ungaqiniseki ngemithwalo ethile yemithwalo yemfanelo, ungacabangi ukuthi umqashi uzonikeza ukuqeqeshwa. Ukusayina kusho ukuthi uyavumelana futhi uyakwazi konke okusemkhakheni wokuqashwa.
Cross uhlole isivumelwano somsebenzi nomsebenzi wokuqala wokusebenza, kufanele bahlanganyele.
Ngemuva kokuthola isipho somsebenzi kanye nenkontileka ebanzi yomsebenzi, yenza amakhophi amaningana amaphepha. Izitifiketi zakho kanye neminye imibhalo efanele kufaka phakathi umshwalense kufanele futhi ibe ngamakhophi. Kuyisixwayiso sokugwema ukulahlekelwa noma ukulimala. Yonke imibhalo ehlobene nomsebenzi kufanele ibe ngamakhophi amaningana. Ngisho nangemva kokuthola umsebenzi, gcina imibhalo iphephile. Awusoze wazi!
Uma ufika e-UAE, kuwumthwalo womqashi ukukucubungula ezweni futhi uqiniseke ukuthi uhleliwe. Noma yiziphi izinkokhelo zokucubungula ngezimvume zokuthutha kanye nokusebenza kufanele ziphathwe ngumqashi wakho. Ezimweni eziningi, kuzodingeka uhlole ukuhlolwa kwezokwelapha, izimali ezihambisanayo kufanele zikhokhwe ngumqashi. Imvume yokuhlala indawo iyingxenye yomthwalo wemfanelo yomqashi. Lokhu kufana nomthetho webhizinisi we-UAE uma ungabaza, xhumana nenhlangano yokuqasha noma umqashi ngaphambi kokuba uhambe.
Gcina amarisidi wakho
Noma yiziphi izinkokhelo noma ehhotela noma ekuthengeni izinto, amaresidi kufanele agcinwe. Imithetho ye-UAE inemininingwane ethile futhi iqinile ngokukhwabanisa nezinye izinto eziphathelene nokukhathazeka. Futhi, kungasiza ekuboniseni umthwalo wemfanelo kanye nokuphendula kumqashi wakho. Ngaphandle komsebenzi wokufuna umsebenzi, kuwumkhuba omuhle wokuziphendulela komuntu siqu. Njalo gcina amaresidi ukuze ubeke izindleko zakho.
Futhi, gcina amadokhumenti akho siqu ephephile. Awusoze wazi ukuthi uzokwenzelwa nini umthetho ukuba uwakhiphe, ucabange ukuthi uyisimo se-expat. Yiqiniso, lapho ufika, umqashi wakho kanye nezinye izinhlangano ezilawulayo kuzodinga ukuqinisekisa ukuthi ungubani kanye nokuthembeka ngokucela ipasipoti yakho, i-visa, kanye nemvume yokusebenza. Amadokhumenti nawo ayadingeka uma ufaka imvume yokuhlala ngumqashi wakho.
Qinisekisa ukuthi ukhetha amadokhumenti eduze kwephemithi yakho. Kumele ube nokufinyelela kumadokhumenti ngaso sonke isikhathi.
Lapho efika e-UAE, umqashi kufanele anakekele konke ukucubungulwa kwedokhumenti. Kungakapheli isonto, umqashi kufanele akunikeze isivumelwano esiphezulu somsebenzi. Inkontileka kufanele ifane ngokufana nesipho sokuqala. Kwezinye izimo, kungenzeka kube khona umsebenzi wangempela futhi umqashi unezinye izisusa ezimbi. Ungalindeli elinye isonto ukuze uhlanganyele nomqashi uma uzizwa noma yikuphi ukuphulwa noma ukungathembeki emsebenzini wokunikezela. Bika le ndaba eHhovisi Labasebenzi ukuze wenze izenzo ezisheshayo kanye nosizo. Futhi, kufanele ubike umqashi uma behluleka ukukhokha inkokhelo yakho ngokugcwele noma ngesikhathi esithile ngosuku oluvunyelwene ngalo nemali emsebenzini wesivumelwano.
Ngaphandle kokulindela umqashi, kufanele wazi amalungelo akho njengemithetho ye-UAE.
Konke okudingeka ukwazi ngokusebenza ku-UAE
Uma uhlela ukusebenza e-UAE, kuningi okufanele ucabangele ngaphambi kokudlulela ogwadule oludumile lwase-Arabia. Uma uvela e-UK, e-USA, Canada, nakwamanye amazwe anama-visa angaguqulwanga, umi ithuba elihle lokuthola umsebenzi. Iningi labathweswe iziqu kula mazwe bakhetha ukusebenzisana nezinkampani zamazwe ahlukahlukene, ezinamagatsha asekhaya. Leli yithuba elihle kakhulu lokuthola imisebenzi namahhovisi. Kuyithuba futhi lokuthi uzuze emiholweni engenayo intela ukukhulisa imali oyitholayo.
Okokuqala, ake sihlole inqubo yokuthola umsebenzi ku-UAE
Lesi sizwe esidumile sase-Arabia sinokuningi okuzosinika izivakashi nezivakashi abafisa ukuhlala lapha. Izidumbu ezinkulu kanye nemvelo eyingqayizivele yenza isizinda sendawo esheshayo yokuthuthukiswa kwendawo yasemadolobheni ngokuthambekela kwe-ultra-zanamuhla. Lokhu kusho nokuthi kunesidingo esikhulu sabasebenzi abanekhono. I-Dubai, isibonelo, inikeza amathuba amaningi kubantu abafuna umsebenzi wangaphandle ukukhulisa umnotho wabo esifundeni. Lokhu kusebenzisana okuzuzisana ndawonye kusiza izwe ukuthi lizuze ulwazi nolwazi ngenkathi uthola imali oyifunayo.
Nakuba i-UAE ingenye yamazwe avulekile kakhulu ozoyithola, kuningi okumele ufunde futhi. Udinga ukuqonda amasiko nezenkolo ngoba kuthathwa ngokungathí sina lapha. Inkolo kanye nesiko jikelele lihlangene nencazelo yempilo yansuku zonke. Ukufunda ukuziphatha kwabantu nendlela yokwenza izinto kuyokusiza ukuthi ubhekane kalula.
Mayelana nomsebenzi; abathunywa abaningi basebenza ngokusemthethweni ngaphansi kokuxhaswa. Okubaluleke kakhulu, imali engenayo yentela ayinakuvinjelwa. Kukhona futhi inkokhelo yezinsizakalo zamahhala ngemuva kokuphela kwezivumelwano.
Lapho Uzosebenza Ku-UAE
Uma uzibuza ukuthi uzosebenza kuphi e-UAE, udinga ukwenza ucwaningo oluncane. Cabanga iqiniso lokuthi izimboni ezinkulu kunazo zonke e-UAE zidonse imithwalo yezisebenzi ezinamakhono ezivela emhlabeni wonke. Izinsizakusebenza zemvelo zikaphethiloli zinikeze amandla umnotho wezwe ukukhiqiza ukukhula okuphezulu kakhulu okuke kwabonwa. Lokhu ukukhula kusiguqule isifunda saba indawo enkulu yabavakashi kubantu abaningi emhlabeni jikelele. Kubhekelwe futhi ukuba yindawo yebhizinisi elinenzuzo enkulu futhi ethandwayo ngekusasa. Ukwethulwa kweNdebe Yomhlaba wonke yeBhola yezinyawo kukhombisa nokubaluleka kwesifunda emhlabeni wonke jikelele.
Namuhla, lokhu kuyisakhiwo sokuhweba sePersian Gulf futhi kuholela emhlabeni ekuthengisweni nasekuthengisweni kwamanye amazwe. Isibonelo, okuningi kokudla okudliwe lapha kungeniswa. Lokhu kusho ibhizinisi elikhulu izinkampani ezipakisha ukudla okusheshayo ububanzi bezinye izinketho.
Umbiko wezezimali wakamuva ukhombisa ukuthuthuka okukhulu ikakhulukazi ngemuva kokuwohloka kodumo kwe-2008. Kuholele ekushintshanisweni kwemakethe, okwakususelwa kumanani kawoyela nempahla ethengiswayo. Intengo kawoyela eguquguqukayo yaba isimemo sokuvuka ukuze sihlukane siye kweminye imikhakha ukuvikela isigaba sebhange esibhidlika. I-Banking nezezimali, ezohwebo nezentengiselwano, kanye nezokuvakasha nezokuzijabulisa zaba ngumkhuba omusha we-Expo 2020 UAE.
I-Dubai iyaziwa ngokusetshenziswa kwezinto zokunethezeka futhi noma yikuphi ukushintshwa kule nqubo kuthinta u-UAE okuningi. Ukutshala izimali ekuhambeni kwezomnotho sekuye indlela ephephile yokuphuma enkingeni. Ngaphandle kwemboni ye-petroleum kanye ne-petrochemicals embonini, nawe unethuba lokusebenza ekudobeni, zokwakha, u-aluminium, ukulungiswa kwemikhumbi yokuhweba, imisebenzi yezandla, amakhemikhali nezinkampani zomanyolo.
Ukufaka isicelo sokusebenza ku-UAE
I-Middle East inikeza amathuba amakhulu namathuba okusebenzisa ulwazi lwakho namakhono akho. Uma ungumfundi oqeqeshiwe noma ngabe yiliphi izinga lemfundo nokuqeqesha, ungazuza ngamathuba e-UAE. I-Dubai, isibonelo, ivumela abantu abaningi bezinye izizwe ukuthi bathathe imisebenzi ukuze baqhubekele ukuthuthukisa izifiso zabo. Lokhu kusho ukuthi abantu bezinye izizwe banethuba elihle lokusebenza lapha kanye nalo lonke i-UAE ngaphandle kokuhlupheka okuningi. Ngeke kube nomncintiswano wemisebenzi, njengoba ibuyele ekhaya ngakho ungakhathazeki ngezinhlu ezide zabafakizicelo futhi usebenze okuningi. Phakathi kwemisebenzi ezuzisa kakhulu namakhono okudingekayo; ukuhlaziywa kwezibalo, ubudlelwane bomhlaba wonke, ukuhlelwa kwe-algorithm, imayini yedatha, inqubomgomo yomphakathi, izakhiwo zewebhu, ukumaketha kwe-SEO / SEM, kanye nezinkampani ze-UI
Uma ufuna ukusebenza ku-UAE; kunezinyathelo ezimbalwa okudingayo okufanele uzicabangele. Ukungena emakethe yemisebenzi eDairobi kudinga ulwazi lwesifunda kanye nezomnotho ohambisanayo. Phakathi kwezindaba ezibaluleke kakhulu zihlanganisa; i-visa, ukuxhaswa, nokuthi ungabhekaphi amathiphu we-interview. Nakhu okudingayo ukuze uthole ngaphambi kokuba uthole umsebenzi wakho wephupho kuma-United Arab Emirates.
Thola i-Visa efanele
Ukulungela umsebenzi ku-UAE kudinga imibhalo efanele. Ukuqinisekisa amadokhumenti akho yisinyathelo sokuqala esibalulekile kule nqubo. I-visa yomsebenzi iyithekithi yakho yokuthola amalungelo namalungelo noma isimo somsebenzi. Lokhu kuyimfuneko ebalulekile kubantu bezinye izizwe abazimisele ukuthola umsebenzi lapha. Ungangena kwi-Emirates kumvakashi noma i-visa yezokuvakasha kodwa kuzodingeka uthumele isimo sakho se-visa uma usutholile umsebenzi. Abaningi bezinye izizwe e-Dubai akudingeki ukuba bathole i-visa ngaphambi kokufika kwabo. Kufanele futhi uqaphele ukuthi izwe lakho lomvelaphi lidlala indima ekunqumweni kwama-waivers. Isibonelo, ezinye izakhamuzi ezinemvume yokugcina i-visa yazo ku-UAE ngezinsuku ze-90 zifaka;
ISwitzerland, iSweden, iSpain, iSlovenia, iSlovakia, iRomania, nePortugal, Poland, ENorway, eMalta, eLuxembourg, eLithuania, eLiechtenstein, eLatvia, e-Italiya, eHungary, eHolland, eGrisi, eJalimane, eFrance, e-Estonia, eDenmark, eCzech Republic, eCyprus, eCroatia, eBulgaria, naseBelgium. Abanye abadingi i-visa yezinsuku ze-30. Kubandakanya; AmaCanada, amaChinese, ama-Australia, amaJapane, amaRussia, ama-Ireland, amaBrithani kanye nabaseMelika.
Ukusebenza ngaphandle kwe-visa yokusebenza efanele kuyingozi. Uma ubanjwe, uzobe usenkingeni yokungabi nalutho. Uma kungenjalo, kuyodingeka ukuthi ushiye izwe ekupheleni kwe-visa yakho. Ngenhlanhla, lapho uthola umsebenzi, umqashi wakho uzoqala inqubo ye-visa kuwe ukuze kungadingeki ukhathazeke ngakho. Inkampani izobamba inqubo. Konke okudingeka ukwenze ukuhambisa imibhalo yakho esemthethweni njengenombolo yakho yepasipoti ukuqala inqubo. Kodwa-ke, akusikho konke okudingekayo ukufaneleka ukuthola i-visa yomsebenzi.
Amakhadi ezempilo kanye nezemisebenzi
Ngesikhathi sokusebenza kwe-visa yakho yomsebenzi, uzodingeka ukuthi ungenise amarekhodi akho ezokwelashwa. Le mibhalo yezempilo kumele ihambisane namakhophi epasipoti, izithombe, incwadi yomsebenzi kanye nesicelo se-visa. UMnyango Wezempilo Nezinsizakalo Zezokwelapha udinga ukubambelela ngokuphelele kulokhu okuthunyelwe ngaphambi kokuqala ukusebenza nge-visa yakho yomsebenzi. Uzodingeka ukuthi uhlole igazi njengemfuneko eMnyangweni Wezempilo Nezinsizakalo Zokwelashwa. Ukuhlolwa kufanele kukhombe izifo ezifana ne-HIV / AIDs, Hepatitis C, kanye ne-Tuberculosis. Okwamanje, akukho thwali langaphandle lezifo elivunyelwe ukuhlala lapha. Kungemva kokuphasa izivivinyo kuphela lapho ungathola khona ikhadi lezempilo, eliphoqelekile kubasebenzi bangaphandle kuyo yonke i-United Arab Emirates.
Ikhadi labasebenzi lizodinga isithombe sepasipoti, inkontileka yomsebenzi, i-visa yokufaka, amarekhodi wezokwelapha, kanye nemininingwane yabaqashi. Lemininingwane kumele ibonakale futhi iqinisekiswe yi-Ministry of Labor.
I-Director's General Directorate ye-Residency kanye Nezindaba Zangaphandle kufanele uthole i-visa yakho yokuhlala. Bafuna ukuba khona kwakho ngomuntu ukuqedela isicelo. Uzogcwalisa ifomu bese unikeza imibhalo yakho (isitifiketi sezempilo, imvume yokufaka, amarekhodi ezempilo, izithombe zepasipoti, ikhadi lomsebenzi kanye neresidi ukuqinisekisa ukuthi ukucubungula ikhadi lakho lomsebenzi liyaqhubeka).
Ngamaphepha kanye nenqubo endaweni, uzobe usulungele ukusebenza e-Dubai.
Ukuthola umbono obanzi wokuthi ungawuthola kanjani umsebenzi, sebenzisa i-Intanethi. Lapha uzovezwa ezinkampanini ukuqasha eDubai ngolwazi olukhulu ngemininingwane. Thola amasayithi ajwayelekile futhi athembekile ahlangabezana nomsebenzi ngokufunwa namathuba okusebenzisa kalula. Uhlobo oluku-inthanethi lukuvumela ukuthi usebenzise izinsiza okungenani ezinjengemali nesikhathi ngoba uzobe ungahambi ungene emahhovisi. Kuyinto elula kakhulu futhi esebenza kahle ukusebenzisa izinsiza eziku-inthanethi ukuthola othintana namathuba lapha eDubai. Izinkampani zithembekile futhi ngokusebenzisa amasayithi wazo amiswe kahle, ziqasha abantu bangaphandle abaningi.
I-Dubai ingenye yezindawo ezinhle kakhulu zokuthola umsebenzi. Kodwa ukuze ufike lapho kuyoba nemizamo eminingi nokucubungula ulwazi oludingekayo. Futhi wena njengomhloli womsebenzi, uzodinga ukuphatha umsebenzi wakho ngokucwaninga ngokuhlakanipha. Ungasebenzisa njalo inkampani yethu ukukusiza uthole umsebenzi e-United Arab Emirates. Futhi ngokuvamile, isikhathi siyisihluthulelo sokuthola umsebenzi e-Dubai. Ngoba, uma ufuna ukuthuthela phesheya ungakhetha ngokucacile i-Dubai njengendawo yokuhlala. Ngithemba ukuthi uzobhalisa i-CV yakho kuwebhusayithi yethu futhi ummeleli wethu we-HR uzokusiza ukuthi uthole umsebenzi e-Emirates.
Singakusiza kanjani ukuthola umsebenzi?
Inkampani yethu inikeza isevisi ye-100% yokuqinisekisa ekusebenzeni kwakho emsebenzini. Ngaphansi kwalezi zimo, sinethemba lokukusiza ukuthola umsebenzi e-Dubai. Ithimba lethu lisiza imikhakha eminingana. Kusuka imisebenzi yokumaketha eMpumalanga Ephakathi umnyango. Kuya ku imisebenzi yasebhange e-UAE. Inkampani yethu ibasiza abafuna umsebenzi e-UAE.
Inkampani yaseDaily City isiza abafuduka eMpumalanga Ephakathi. Ukusuka eNdiya kuya e-Dubai, ukusuka ePakistan kuya e-Abu Dhabi. Silapha ukukubeka e-United Arab Emirates. Ngakho-ke, ungabi nesikhathi sakho futhi uthole umsebenzi nenkampani yethu.
Manje sisiza ukubeka ama-expats emisebenzi e-Dubai
Thola UJob e-Dubai ?. Ngokumangazayo njengoba uqaphele ungathola ukuthi umsebenzi wokuphupha.
Simply layisha kabusha futhi uqale umsebenzi omusha ku Dubai!
Layisha kabusha kuya okusheshayo I-Dubai Inkampani e-UAE!
IDubai City Company manje ihlinzeka okuhle iziqondiso Imisebenzi eDubai. Ithimba lethu linqume ukungeza imininingwane yolimi ngalunye ngokuchazwa kweDubai. Ngakho-ke, unalokhu engqondweni, manje ungathola izinkombandlela, amathiphu nomsebenzi kwi-United Arab Emirates ngolimi lwakho.